We Fight We Win. -- " More than Media ": နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှုကြီး၏ နောက်ကွယ်မှာ
အာဇာနည် ၉ ဦးနှင့် နတ်ဆိုး ၉ ကောင် (ဝါ) အာဇာနည့်နေ့က ပေးသော သင်္ခန်းစာနှင့် လမ်းညွှန်ချက်..
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်ကြီးများ လုပ်ကြံခြင်း မခံရမီ၊ မြန်မာ မျိုးချစ်များ၏ စစ်အတွင်း ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သော ဒေါက်တာဘမော်က … "သေနတ် ကိုးကွယ်မှုဟာ အစွဲအလမ်းကြီးနေတဲ့ အရာကို ကိုးကွယ်သလို ဖြစ်လာတယ်။ ဂျပန်တွေဆီက မြန်မာတွေ နှစ်ချက် လေ့လာခဲ့ရတယ်။ လူစုလူဝေး အစည်းအရုံးကို အခြေခံတဲ့ ခေါင်းဆောင်မှု နည်းအတတ်ပညာနဲ့ လက်နက် တပ်ဆင်ထားသူများရဲ့ အာဏာနဲ့ တင့်တယ်မှု ဖြစ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်ကို ရွေးချယ် တင်မြှောက်ပွဲတွေက ဆုံးဖြတ်မှာ မဟုတ်ဘဲ သေနတ်က ဆုံးဖြတ်မှာ ဖြစ်တယ်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ ခင်ဗျားတို့ လိုအပ်တာက နိုင်မယ့်ဘက်က စမိဖို့နဲ့ သေနတ်တွေ အမြောက်အမြား ရှိဖို့ပဲ ဖြစ်တယ်" ဟု မှတ်ချက် ချခဲ့ဖူးသည်။
ဤသို့အားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရေးသည့် ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့မှ စပြီး ကြေကွဲ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ အဖြစ်ဆိုးများဖြင့် ပြည့်နှက်နေရသည့်မှာ ယနေ့တိုင် ဖြစ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် အာဇာနည်နေ့က ပေးသည့် သင်္ခန်းစာနှင့် လမ်းညွှန်ချက်မှာ အထက်ပါ "သေနတ် ကိုးကွယ်မှု" အယူအဆကို မြန်မာနိုင်ငံရေး လောကမှ အပြီးတိုင် ပျောက်ကွယ်သွားအောင် တိုက်ဖျက်ရေးပင် ဖြစ်ပေတော့သည်။
အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီးများ (ဝါ) အာဇာနည် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ
(ဆက်ဖတ်ရန် ခေါင်းစဉ် ကို နှိပ်ပါ။)
(၃၂) နှစ်၊ မြန်မာ့ အမျိုးသားရေး လှုပ်ရှားမှု၏ ခေါင်းဆောင်ကြီး၊ ဘုရင်ခံ အမှုဆောင် ကောင်စီ၏ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ (သို့) တကယ့် လက်တွေ့အားဖြင့် လွတ်လပ်ရေး မရမီ ဝန်ကြီး အဖွဲ့၏ ဝန်ကြီးချုပ်၊ ၎င်းအပြင် ထိုအစိုးရ အဖွဲ့၏ ကာကွယ်ရေးနှင့် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး၊ ကျည်ဆန် ၁၃ ချက် သင့်သော ဒဏ်ရာဖြင့် နေရာတွင်ပင် ပွဲချင်းပြီး ကွယ်လွန် ခဲ့ရသည်။
၅၄) နှစ်၊ စာရေးဆရာ၊ သတင်းစာဆရာနှင့် ဒီးဒုတ်ဂျာနယ်၏ အယ်ဒီတာ၊ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီး၊ သူ့ အသက်အရွယ်နှင့် ဦးနှောက်ထဲ ဝင်သွားသော ကျည်ဆန် အပါအဝင် ကျည်ဆန် ၅ ချက် ရရှိသည့်တိုင် နေ့လယ်ပိုင်း အထိ ရန်ကုန် ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးတွင် အသက်ရှင်လျက် ရှိနေသေးပြီး၊ ညဘက်တွင် ကွယ်လွန်သွားသည်။
(၄၉) နှစ်၊ လူငယ် ခေါင်းဆောင်များကြားတွင် အသက်အရွယ် ကြီးရင့်သော နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး၊ အဆုတ်ကို ထွင်းဖောက်သွားသော သေနတ်ဒဏ်ရာဖြင့် နေရာတွင် ပွဲချင်းပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
(၄၉) နှစ်၊ မန္တလေးမြို့ မူဆလင်ခေါင်းဆောင်၊ ပညာရေးနှင့် အမျိုးသား စီမံကိန်း ဝန်ကြီး၊ ဒဏ်ရာ ၆ ချက် ရရှိပြီး နေရာတွင်ပင် ပွဲချင်းပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
(၄၆) နှစ်၊ ဦးအောင်ဆန်း၏ အကို၊ ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးနှင့် ထောက်ပံ့ရေး ဝန်ကြီး၊ ကျည်ဆန်ဒဏ်ရာ (၈) ချက် ရရှိပြီး နေရာတွင်ပင် ပွဲချင်းပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
(၄၃) နှစ်၊ ဟင်္သာတမှ ကရင် အမျိုးသား တဦးဖြစ်ပြီး ဂျပန် သိမ်းပိုက်ထားစဉ်က ပြန်လည် ခုခံတော်လှန်ရာ၌ ပါဝင်ခဲ့သည်။ စက်မှုလက်မှု ဌာနနှင့် အလုပ်သမား ဌာနဝန်ကြီး၊ ကျည်ဆန် ၁၅ ချက် ထိမှန်ခဲ့သည်။ နေရာတွင်ပင် ပွဲချင်းပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
မိုင်းပွန် စော်ဘွားကြီး စပ်စံထွန်း(၁၉၀၇-၁၉၄၇)
(၄၀) နှစ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်မှ မိုင်းပွန်စော်ဘွားကြီး၊ နယ်ခြားဒေသ ဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံ ဝန်ကြီး၊ ဦးခေါင်းတွင် ဒဏ်ရာ ၂ ချက် ရရှိပြီး ၂၀ ရက်နေ့ မွန်းတည့်ချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီး၌ ကွယ်လွန်သည်။
(၃၄) နှစ်၊ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ဌာန၊ ဒုတိယ အတွင်းဝန် (ICS)၊ အစီရင်ခံစာ တခုကို လာရောက် တင်သွင်းနေစဉ် လူသတ်သမားများ၏ ကျည်ဆန်များ ထိမှန်သွားခြင်း ခံရသည်။ နေရာတွင်ပင် ပွဲချင်းပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
(၁၈) နှစ်၊ ဦးရာဇတ်၏ သက်တော်စောင့်၊ မန္တလေးအနီးရှိ တောင်ပြင် သိပ္ပံရပ်မှ မူဆလင် လူငယ်တဦး ဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေး ခန်းမတွင်းမှ သေနတ်သံများ ကြားရသဖြင့် အနီးရှိ ရုံးခန်းမှ ပြေးထွက်လာစဉ် ဆုတ်ခွာ ပြေးသွားနေသော လူသတ်သမားများ၏ ပစ်ခတ်ခြင်းကို ခံရသည်။ ဒဏ်ရာ ၄ ချက်ရရှိပြီး ဆေးရုံတွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
လူသတ်သမားများ (ဝါ) နတ်ဆိုးများ
ဦးစော၊ ဂဠုန်၊ ၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် သာယာဝတီမြို့၌ မွေးဖွားသည်။ လူသတ်သမားများ၏ ခေါင်းဆောင်ဟု အစွပ်စွဲခံရသူ၊ သမ္ဘာရင့် လက်ျာ နိုင်ငံရေးသမား ဖြစ်ပြီး ဦးအောင်ဆန်း၏ အဓိက ပြိုင်ဘက် ဖြစ်သည်။ သူရိယ သတင်းစာကို စတင် ထူထောင်သူနှင့် မျိုးချစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်သည်။ ၁၉၄၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှ ၁၉၄၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ အထိ နန်းရင်းဝန်၊ ၁၉၄၂ မှ ၁၉၄၆ အထိ ယူဂန္ဓာပြည်တွင် အထိန်းသိမ်း ခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ချုပ်ဆိုသော အောင်ဆန်း-အက်တလီ စာချုပ်ကို အသိအမှတ်ပြုရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ဦးအောင်ဆန်းနှင့် သူ့ အမှုဆောင် ကောင်စီ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအား သတ်ဖြတ်မှုဖြင့် ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်တွင် အဖမ်းခံရလျက်၊ စွဲဆိုထားသည့် အတိုင်း ပြစ်မှု ထင်ရှားသဖြင့် အပြစ်ပေးခံရပြီး၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၈ ရက်နေ့တွင် အင်းစိန်ထောင်၌ ကြိုးပေးခံရသည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အပြီး ဗြိတိန်၏ ဝန်ကြီးချုပ် အသစ် အဖြစ် ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံရသော လေဘာ ပါတီ ခေါင်းဆောင် 'ကလီးမင့် အက်တလီ' (Clement Atlee၊ အောင်ဆန်း-အက်တလီ စာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီး မြန်မာနိုင်ငံအား တနှစ်အတွင်း လွတ်လပ်ရေး ပေးမည်ဟု အာမခံခဲ့သူ) က ၁၉၄၇ ခု၊ ဇန်နဝါရီလ အတွင်း ကျင်းပခဲ့သည့် လန်ဒန် ဆွေးနွေးပွဲတွင် အဖွဲ့ဝင် တဦး အဖြစ် ပါဝင် ဆွေးနွေးခဲ့သူ ဂဠုန်ဦးစော အပေါ် ယခုကဲ့သို့ မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
"လူနည်းစု ပါတီရဲ့ ကိုယ်စားလှယ် တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးစောက လွဲလို့ သူတို့ အားလုံးဟာ နှစ်လိုဖွယ်ရာ ကောင်းလှပါတယ်။ စစ်ကြီး မပြီးခင်က ကျနော် ဦးစောကို တွေ့ခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူဟာ 'ပြုံးပြုံးကလေးနှင့် မိုက်တဲ့သူ' ဆိုတဲ့ လူစားမျိုးလို့ ကျနော် သူ့ကို အကဲခတ်ပြီး အသိအမှတ် ပြုခဲ့ပါတယ်။"
မောင်စိုး၊ သေနတ်သမား၊ မင်းလှမြို့မှ ဂဠုန်တပ်ဖွဲ့ဝင် တဦးဖြစ်ပြီး ဦးစော၏ အနီးကပ် နောက်လိုက်ဖြစ်၍ ဦးစော ခြံအတွင်း၌ စောစီးစွာကပင် နေထိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ သေဒဏ် ပေးခံရသည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၈ ရက်နေ့တွင်ပင် အင်းစိန်ထောင်၌ သေဒဏ် အစီရင်ခံရသည်။
ရန်ကြီးအောင်၊ အသက် (၁၈) နှစ်သာ ရှိ၏။ အသက် အငယ်ဆုံး သေနတ်သမား ဖြစ်သည်။ ဦးစော တဝမ်းကွဲညီ၏ သားဖြစ်သည်။ စတုတ္ထမြောက် သေနတ်သမား လိုအပ်လာသည့် နောက်ဆုံး အချိန်ကျမှ သူ့ကို ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူ၏ တဇောက်ကန်း အကျင့်ကြောင့် သေနတ်သမား အဖြစ် အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်ခဲ့သည်။ သေဒဏ် ပေးခံရသည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၈ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန် အကျဉ်းထောင်၌ သေဒဏ် အစီရင်ခံရသည်။
သုခ၊ လူသတ်သမားများအား အတွင်းဝန်ရုံးသို့ ဂျစ်ကားဖြင့် မောင်းပို့ ပေးခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့ရှိ အစိုးရ အထက်တန်းကျောင်းမှ ၉ တန်း အောင်မြင်ခဲ့သည်။ စစ်ပြီးနောက် ကျိုက်လတ်မြို့ ဖဆပလ အဖွဲ့၏ ငွေထိန်းဖြစ်ပြီး ကုန်သည်တဦး ဖြစ်သည်။ သက်နှင်းက သူ့ကို ဦးစောနှင့် မိတ်ဆက် ပေးခဲ့သည့် အပြင် မျိုးချစ်ပါတီ တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး အဖြစ် စာရင်းတင်ပေးခဲ့သည်။ ဦးစော၏ ခြံဝင်းသို့ လုပ်ကြံမှု မတိုင်မီ နောက်ဆုံး ရောက်ရှိလာသူ ဖြစ်သည်။ သေဒဏ် ပေးခံရသော်လည်း ကြိုးပေးမည့်နေ့ မတိုင်မီနေ့ ညနေပိုင်းတွင်မှ အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ သို့ လျှော့ချခြင်း ခံရသည်။
ခင်မောင်ရင်၊ ကြံရာပါ တဦးဖြစ်၍ ရှေ့ပြေးအဖွဲ့ စီးသော ဖို့ဒ်ဆန် ထရပ်ကားကို မောင်းသူ ဖြစ်သည်။ ဦးစော ဇနီးသည်၏ တူတော်သည်။ ဝန်ကြီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး ထိုင်နေကြောင်း လျှို့ဝှက် သင်္ကေတဖြင့် သတင်းပေးပြီး လူသတ်သမားများ ထွက်ခွာလာရန် အချက်ပြခဲ့သည်။ သေဒဏ် အပေးခံရသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ သို့ လျှော့ချခြင်း ခံရသည်။
လူသတ်သမားနှင့် ကြံရာပါ အဖွဲ့ထဲတွင် ဝါကြီးသူ တယောက်ဖြစ်သည့် ခင်မောင်ရင်၏ ဖြောင့်ချက်တွင် အတိတ်ကာလက ဖြစ်ရပ်များကို တင်ပြရာတွင် ဦးစော၏ အသက်ကို ၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ရန်ရှာခဲ့သည့် အကြောင်းမှ ဆက်၍ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော ဖြစ်ပုံ တစုံ ထုတ်ဖော် ပြောပြခဲ့သည်မှာ ဦးစောက အမိန့်ပေးပြီး လုပ်ခိုင်းသည့် တာဝန်အရ "စစ်ဦးစီး ဗိုလ်ချုပ်၏ ပြည်လမ်းနေအိမ် ညပိုင်း ဧည့်ခံပွဲတွင် ဦးအောင်ဆန်းအား ပစ်ခတ်ရန် စေလွှတ်ခဲ့ရာ ဦးအောင်ဆန်း ကားဖြင့် ရောက်လာသည်ကို မြင်သော်လည်း သူပြန်လာကာ ဦးစောအား ဦးအောင်ဆန်း ထိုပွဲသို့ တက်ရောက်ခြင်း မရှိဟူ၍ လိမ်ပြောလိုက်ကြောင်း"၊ သူပြောတာ မှန်တယ်လို့ ယုံကြည်ရလျှင် ဦးစော လန်ဒန်မြို့မှ ၁၉၄၆ ခု၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ပြန်ရောက်လာပြီး မကြာမီလောက်က ဖြစ်လိမ့်မည်။
မောင်နီ၊ ကြံရာပါ တဦးဖြစ်၍ ရှေ့ပြေး အဖွဲ့နှင့် လိုက်ပါ သွားခဲ့သည်။ လူသတ်သမားများ ထွက်အပြေးတွင် လွတ်မြောက်နိုင်ရန် အကူအညီ ပေးရေးအတွက် ခြောက်လုံးပြူး သေနတ် တလက်ဖြင့် အတွင်းဝန်များရုံး အထွက် ဂိတ်ပေါက်မှ စောင့်နေခဲ့ရသည်။ သေဒဏ် အပေးခံရသော်လည်း အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ သို့ လျှော့ချခြင်း ခံရပြီး ယင်းသတင်းကို သုခနှင့် တပြိင်နက်တည်း အသိပေးခံခဲ့ရသည်။
မှုန်ကြီး၊ ကြံရာပါ တဦးဖြစ်၍ ရှေ့ပြေး အဖွဲ့နှင့် လိုက်ပါ သွားခဲ့သည်။ အုတ်ဖို့မြို့ အနီးမှ ကျေးရွာသား ဖြစ်ပြီး အလုပ်ကြမ်းသမား တဦး ဖြစ်သည်။ ဦးစောက သူ့ကို အစေခံ တဦးကဲ့သို့ ခိုင်းခဲ့သည်။ ဝန်ကြီးအဖွဲ့ စည်းဝေးနေကြောင်း လူသတ်သမားများကို သူက အချက်ပြခဲ့ရသည်။ သေဒဏ် ပေးခံရသည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၈ ရက်နေ့တွင် အင်းစိန်ထောင်၌ သေဒဏ် အစီရင်ခံရသည်။
ဘညွန့်၊ ကြံရာပါ တဦးဖြစ်၍ ရှေ့ပြေး အဖွဲ့တွင် ပါဝင်သည်။ ဦးစော၏ လူယုံတော် အဓိက နောက်လိုက်ခေါင်းဆောင် ဖြစ်ပြီး သူတဦးသာ ဦးစော၏ အိမ်အတွင်း နေထိုင်ခွင့်ရသည်။ ဘညွန့်သည် ဦးစော၏ မျိုးချစ် ပါတီဝင် ဖြစ်လာပြီး နောက် လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ စုဆောင်းရန်နှင့် ရန်ပုံငွေ ရှာရန် တာဝန် ၃ ရပ် သူ့ကို အပေးခံခဲ့ရသည်။ ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်တထောင်ပင်မ စစ်လက်နက် ပစ္စည်းတိုက်မှ ဘရင်းဂန်း အလက် ၂၀၀ ထုတ်ယူသွားသူမှာ သူဖြစ်ကြောင်း ဘညွန့်က ထုတ်ဖော်လိုက်သည်။ ထိုလက်နက်များကို သုံးတန်တင် လော်ရီကားဖြင့် တကြိမ်တည်း တင်ပြီး ဦးစော၏ အေဒီလမ်း နေအိမ်သို့ သူမောင်းပို့ခဲ့ကြောင်း သူက ပြောဆိုလိုက်သည်။ နောက်တကြိမ်တွင်လည်း ပြည်လမ်းပေါ်ရှိ အခြား လက်နက် သိုလှောင်ရုံ တခုမှ ဒဿမ (၃၀၃) ကျည်ဆံ အတောင့် တသိန်းတိတိကို သူသွားရောက် ယူဆောင်ခဲ့ရကြောင်း ဝန်ခံသည်။
သူသည် အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ နှစ်ဘာသာသင် အထက်တန်းကျောင်းတွင် ပညာသင်လာသူ ဖြစ်၍ ဦးစော၏ သေနတ်သမားများထဲ၌ ပညာ အတတ်ဆုံး ဖြစ်လေသည်။ ထို့အပြင် အသိဉာဏ် ရှိ၍ အိုးသည်ကုန်း တရားရုံးတွင် စာရေး ဖြစ်ခဲ့သည်။ သခင်နုအား သတ်ရန် တာဝန် အပေးခံရသည်။ ဘုရင့်သက်သေ (ဖော်ကောင်) အဖြစ် ဘက်ပြောင်း ထွက်ဆိုရန် သဘောတူခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အခြေအနေ အရ သူ့အား အပြစ်မှ ခွင့်လွှတ်မှု အပေးခံရလျက် အလုပ်ကြမ်းနှင့် ပြင်းထန်သော ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်နှင့် ၆ လ ချမှတ် ခံခဲ့ရသည်။
အထူးခုံရုံးဖွဲ့ အမှု စစ်ဆေး စီရင်ခြင်း
ထိုစဉ်က ဘုရင်ခံဖြစ်သူ ဆာဟူးဘတ်ရန့်စ် (Sir Hubert Rance) သည် ထိုအမှုကို စစ်ဆေး ဆုံးဖြတ်ရန် ၁၉၄၇ ခု၊ စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် တရားသူကြီး ၃ ဦးပါ "အထူးခုံရုံး" ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ခုံရုံး သဘာပတိ အဖြစ် တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး ဦးကျော်မြင့်အား တာဝန် ပေးအပ်ခဲ့ပြီး၊ ခုံရုံး အဖွဲ့ဝင်များ အဖြစ် သမ္ဘာရင့် စက်ရှင် တရားသူကြီးများ ဖြစ်ကြသော ဦးအောင်သာကျော်နှင့် ဦးစီဘူးတို့ကို တရားဝင် ခန့်အပ် တာဝန်ပေးခဲ့သည်။
တရားဆိုင်ခြင်းကို အင်းစိန်ရှိ အထူးခုံရုံးတော်၌ ထိုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် စတင် ပြုလုပ်သော အခါ ၎င်းတရားဆိုင်ခြင်းသည် ဗြိတိသျှ ဘုရင်နှင့် ဦးစော (အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် အဖြစ် စွပ်စွဲခံရသူ)၊ မောင်စိုး (လူသတ်သမား အဖြစ် စွပ်စွဲခံရသူ)၊ သက်နှင်း (လူသတ်သမား အဖြစ် စွပ်စွဲခံရသူ)၊ မောင်စိန် (ခေါ်) စိန်ကြီး (ခေါ်) လှအောင် (လူသတ်သမား အဖြစ် စွပ်စွဲခံရသူ)၊ ရန်ကြီးအောင် (ခေါ်) လှထွန်း (လူသတ်သမား အဖြစ် စွပ်စွဲခံရသူ)၊ သုခ (အတွင်းဝန်ရုံးသို့ လူသတ်သမားများအား ကားဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရသူ ကားဒရိုင်ဘာ အဖြစ် စွပ်စွဲခံရသူ)၊ ခင်မောင်ရင် (ကြံရာပါ ကူညီသူ အဖြစ် စွပ်စွဲခံရသူ)၊ မှုန်ကြီး (ခေါ်) မောင်မှုန် (ကြံရာပါ ကူညီသူ အဖြစ် စွပ်စွဲခံရသူ) တို့၏ အမှု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ တရားဥပဒေ စကားရပ်မှာ၊ "တူညီသော ရည် ရွယ်ချက် အကျိုးစီးပွား အလို့ငှာ လူသတ်ရန် တာဝန်ပေး စေခိုင်းမှု" စသည့် ခေါင်းစဉ် စွဲချက်များဖြင့် ရုံးတင် စစ်ဆေး တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသည့် ဝမ်းနည်း တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာ အဖြစ်ဆိုးကြီးထဲတွင် အာဇာနည် ၉ ဦး ပေါ်ထွက်လာရပြီး၊ ၎င်းတို့အား သတ်မှုဖြင့် အစွပ်စွဲခံရသူ တရားခံမှာလည်း ၉ ဦး ထွက်ပေါ်လာခဲ့ရသည်။
ထိုသို့ တရားဆိုင်ခြင်းကို နောက်ဆုံး ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ အထိ ဆက်လက် ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးနောက် စုစည်းရရှိထားသော ထင်ရှားသက်သေ အစုလိုက် အပြုံလိုက်ကို ဆန်းစစ် သုံးသပ်ပြီးနောက် အထူးခုံရုံးတော် အနေဖြင့် စကားလုံးရေ (၅၂,၀၀၀) ဖြင့် ရေးသားထားသော စီရင်ချက်ကို ချမှတ်နိုင်ခဲ့တော့သည်။ ထိုနေ့က တရားခွင်ကို ဖွင့်ပေးခဲ့သဖြင့် ဥပဒေပညာရှင်များ၊ သတင်းစာ ဆရာများ စသဖြင့် စုရုံး ရောက်ရှိလာလျက် ယင်းလူအုပ်ထဲတွင် မြန်မာ ဝတ်လုံတော်ရမင်းလည်း ဖြစ်ပြီး စာရေးဆရာလည်း ဖြစ်သော ဒေါက်တာမောင်မောင်လည်း ပါရှိခဲ့ပါသည်။ (နောက်ပိုင်းတွင် သူသည်လည်း နောက်လိုက် နတ်ဆိုး တဦး အဖြစ် သူတတ်ထားသည့် ပညာဖြင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းပြုခဲ့သူ) ဒေါက်တာမောင်မောင်က ဤသို့ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။
"စီရင်ချက်ကို ဖတ်ချိန်မှာ တနာရီကျော် ကြာလေသည်။ ပထမဆုံး တရားဆိုင်သည့် နေ့က ကဲ့သို့ပင် တရားခွင် ခန်းမမှာ လူများဖြင့် ပြည့်ကျပ်လျက် ရှိနေပြန်သည်။ တရားခံများ အားလုံး ရောက်ရှိ နေကြသည်။ ၈ ယောက်မှာ တရားခံများအား ထားသော ခြံ အတွင်းရှိ ကြပြီး ဦးစောမှာမူ သူ၏ ဥပဒေ အကြံပေး ဝတ်လုံတော်ရမင်း ဘေးရှိ ကုလားထိုင်တွင် ထိုင်လျက် ရှိသည်။ စီရင်ချက်ကို ဆက်လက် ဖတ်လျက်ရှိပြီး မဆုံးနိုင်သည်နှင့် အမျှ သတင်းထောက်များမှာ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်ကာ စိတ်မရှည်နိုင်အောင် ဖြစ်နေကြသည်။ အမှုတွဲ တခုလုံးကို ပြန်လည် အကျဉ်းချုပ် ပြနေသည်ကို နားထောင် နေရသည်မှာ ကျနော့် အတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ဖြစ်တော့သည်။ ဖတ်နေသော အသံမှာ ပျော့ပျောင်းသည်။ အမှားအယွင်း မရှိ။ ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန်မှ လွတ်ကင်းသည်။ အသံမှာ အနီးမှ လာသော်လည်း အဝေးမှ လာနေ သကဲ့သို့ပင်။ တရားခံများသည် ထိုင်လျက် နားထောင် နေကြသည်။ မည်သို့သော ခံစားမျိုးကိုမှ မပြသကြ။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြောဆိုနေသဖြင့် သူတို့ အများစုမှာ နားမလည်ကြချေ။ အမှုမှာ နောက်ဆုံး ပြီးစီးသွားပြီ ဖြစ်သဖြင့် သူတို့အားလုံး စိတ်သက်သာရာ ရကောင်း ရသွားကြပေလိမ့်မည်။"
သေနတ်သမား ၄ ဦး ဖြစ်သော မောင်စိုး၊ သက်နှင်း၊ ရန်ကြီးအောင်နှင့် မောင်စိန်တို့အား လူသတ်မှုဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဦးစော၊ သုခ၊ မောင်နီ၊ မှုန်ကြီးနှင့် ခင်မောင်ရင် တို့မှာ လူသတ်မှုကို အားပေး ကူညီမှုဖြင့် လည်းကောင်း အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့ အားလုံးကို သေဒဏ် အပြစ်ပေး လိုက်လေသည်။
ထိုအခါ ဦးစောနှင့် အခြားပြစ်ဒဏ် ကျခံရသူများသည် အယူခံလွှာကို တရားလွှတ်တော်သို့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ တင်သွင်းခဲ့သော်၊ တရားလွှတ်တော်၏ ပယ်ချခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။ "တရားခံ တဦးစီသည် ဤလျှို့ဝှက် ပူးပေါင်း ကြံစည်မှုကြီးတွင် အသက်သွေးကြောပမာ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်း တရပ်စီ အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ကြသည်" ဟု တရားလွှတ်တော်က ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။ ဤစီရင်ချက် ချမှတ်မှုကို ဝင်ရောက် တားဆီး စွက်ဖက်ရန် တရားဥပဒေ အကြောင်းအရ မည်သို့သော အကြောင်းအချက်ကိုမျှ မတွေ့ရှိခဲ့ရချေ။ ထိုကြောင့် ပြစ်ဒဏ် ချခံရသူများက တရား လွှတ်တော်ချုပ်သို့ ဆက်လက် အသနားခံလွှာ တင်သွင်းခဲကြပြန်သည်။ လန်ဒန်ရှိ 'ပရီဗီကောင်စီ' က ပြဋ္ဌာန်းထားခဲ့သော ယခင် စည်းမျဉ်း ဥပဒေများမှ လမ်းညွှန်မှုများကို ရယူကာ တရားလွှတ်တော်ချုပ်က ယင်းအသနားခံလွှာများကို သေချာစာ စဉ်းစားလျက် နောက်ဆုံးတွင် ပယ်ချလိုက်လေသည်။
သို့ဖြစ်လေရာ ပြစ်ဒဏ်ချခံရသူ ၉ ဦး အတွက် လမ်းတလမ်းသာ ကျန်တော့သည်။ ၎င်းနောက်ဆုံး မျှော်လင့်ချက်မှာ နိုင်ငံတော် သမ္မတထံမှ သက်ညှာထောက်ထား ကရုဏာပွားမှုကို တောင်းခံရန်သာ ဖြစ်လေသည်။ သမ္မတ နိုင်ငံတော်သစ်၏ ဂုဏ်ကျက်သရေ မြင့်မားလှသော သမ္မတကြီးမှာ ရှမ်းပြည်နယ်မှ ညောင်ရွှေစော်ဘွား 'စပ်ရွှေသိုက်' ဖြစ်သည်။ ထိုနောက်ဆုံးချိန်တွင်ကျမှ ၃ ဦးသာလျှင် တသက်တကျွန်း ထောင်ဒဏ်၊ တနည်းအားဖြင့် အနှစ် ၂၀ ထောင်ဒဏ်သို့ အပြစ်ဒဏ် လျှော့ပေါ့ခြင်း ခံကြရသည်။ ၎င်းတို့မှာ ဂျစ်ကားမောင်းသူ သုခ၊ လူသတ်သမားများ အတွင်းဝန်ရုံးသို့ ရောက်မလာမီ ကြိုတင် ထောက်လှမ်းရသူ ခင်မောင်ရင်နှင့် လူသတ်သမားများ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်ရာလမ်းကို ခြောက်လုံးပြူး တလက်ဖြင့် စောင်ကြပ်ခဲ့ရသူ မောင်နီတို့ ဖြစ်ကြသည်။ ကျန်သောသူ အားလုံးမှာ ကြိုးပေး ခံရသည်။
ထိုသို့ ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ အထူးခုံရုံးတော်က စီရင်ချက်ကို ဖတ်ကြားသည့် အချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းပေါ်ရှိ ဂျူဗလီခန်းမ၌ နိုင်ငံတော် ဈာပန အဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အခြား လုပ်ကြံခြင်း ခံရသူများ၏ ရုပ်အလောင်းများမှာ လဲလျောင်းလျက် ရှိနေဆဲပင်။
အာဇာနည်တို့၏ ရုပ်အလောင်းများအား ပြည်သူလူထု တရပ်လုံး ဂါရဝပြုရန် ဂျူဗလီဟောတွင် ၉ လကြာ ထားခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ရုပ်အလောင်းများ ပါရှိသည့် ခေါင်းများကို ဂျူဗလီခန်းမမှ ရွှေတိဂုံ စေတီတော်၏ မြောက်ဘက် အသစ် ဆောက်လုပ်လိုက်သော အာဇာနည် ဗိမာန်သို့ နောက်ဆုံးခရီး အဖြစ် သယ်ဆောင် သွားခဲ့သည်။ အမြဲတမ်း တပ်မတော်သားများက ခရီးစဉ် တလျှောက် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်လျက် လိုက်ပါလာသော ဈာပန ယာဉ်တန်းသည် ရွှေတိဂုံ ဘုရားလမ်း အတိုင်း တက်ရောက်လာခဲ့သည်။ အာဇာနည်ကြီးများ၏ မှန်ဘောင်သွင်း ဓာတ်ပုံကြီးများကို ချိတ်ဆွဲ၊ ဖုံးအုပ်ထားသော ခေါင်းများကို အမိုးဖွင့် ထရပ်ကားများ၊ ဂျစ်ကားများဖြင့် သယ်ဆောင် လာခဲ့ကြသည်။ ပြည်သူလူထု ၅ သိန်းကျော် လိုက်ပါလာခဲ့သော ယာဉ်တန်းသည် ရွှေတိဂုံ စေတီတော်၏ တောင်ဘက် စောင်းတန်းဘက်ဆီသို့ ဖြည်းညင်းစွာ ရွေ့လျားလာခဲ့သည်။ ဦးအောင်ဆန်းအား သူတို့၏ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အဖြစ် လည်းကောင်း၊ အစစ်အမှန် ခေါင်းဆောင် အဖြစ် လည်းကောင်း ချစ်မြတ်နိုးကြသော ပြည်သူ့ရဲဘော် တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် နံဘေးဝဲယာမှ ခရီးစဉ် တလျှောက်လုံး ချီတက် လိုက်ပါလာခဲ့ကြသည်။ ရွှေတိဂုံ စေတီတော်မြတ်ကြီးကို လက်ဝဲရစ် တဝက်ပတ်ပြီးနောက် ဈာပနယာဉ်တန်းသည် အာဇာနည် ဗိမာန်သစ်ဆီသို့ ဆိုက်ရောက်လာခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ကား အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ ရုပ်အလောင်းများမှာ ထိုနေရာ၌ နားခဲ့ကြလေပြီ …။
ထိုလုပ်ကြံမှုကြီးသည် ထိုအချိန်က မြန်မာတော်တော်များများ အရိုးခံ ယုံကြည်ကြသကဲ့သို့ ဦးအောင်ဆန်းအား ဖယ်ရှား၍ သူတို့ လက်ဝေကို ခံပြီး သူတို့အား မလှန်မည့်သူ တဦးအား အစားထိုးနိုင်ရန် လန်ဒန်ရှိ အာဏာပိုင် ရပ်ကွက်များမှ စီမံသည့် ပူးပေါင်း ကြံစည်မှုတရပ် ဖြစ်ပါသလား။ သို့မဟုတ်ပါက ဗီဗီယန်း၊ ဒိန်း၊ ယမ်းနှင့် မိုးတို့လို လူမျိုးများသည် ပုဂ္ဂလိက လက်နက် မှောင်ခိုသမားများနှင့် မိမိတို့ ဘာသာ စွန့်စွန့်စားစား လုပ်လိုသူများသာ ဖြစ်ကြပါသလား။ ထို့အပြင် 'ဘင်ဂလေ' ဆိုသူမှာ အတိအကျ မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်ပါသနည်း။ ဦးစောနှင့် သူ၏ လက်ပါးစေများကို ဖမ်းဆီးခြင်း၊ ရုံးတင် စစ်ဆေးခြင်းများသည် မည်မျှလောက် သေသေသပ်သပ်၊ စနစ်တကျနှင့် ကျွမ်းကျင် လိမ္မာစွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည် ဖြစ်စေကာမူ ယင်းအမှုကြီး တခုလုံးသည် မျက်စိတဆုံး မြင်နိုင်လောက်ရုံထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုမိုရှုပ်ထွေး ပတ်သက်မှုများ ရှိနိုင်ခဲ့ပေလိမ့်မည် …. .…။
ဘင်ဂလေ၊ ဂျွန်စတျူးဝပ် (Bingley, John Stewart) ၁၈၉၉ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ (၁၉၄၆-၄၇) ခုနှစ်များ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗြိတိသျှကောင်စီ (British Council) ၏ ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့၌ နေထိုင်ခဲ့သည်။ ဦးစောက အင်းစိန်ထောင်ထဲမှ စာအချို့ သူ့ထံ ရေးသားပြီး ငွေတောင်းခံခဲ့သည်။ ထောက်လှမ်းရေး လုပ်ငန်းများတွင် သူ ပါဝင် ပတ်သက်နေသည်ဟု သခင်နု၊ ဦးကျော်ငြိမ်းနှင့် အချို့ ပုဂ္ဂိုလ်များက အကြီးအကျယ် သံသယ ဖြစ်ကြသည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ အလောသုံးဆယ် ထွက်ခွာ သွားခဲ့သည်။ ထို့နောက်ပိုင်း သူ့ ကံကြမ္မာနှင့်သူ မည်သည့် အရပ်ဒေသသို့ ရောက်သွားပြီး မည်သို့ မည်ပုံ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်များမှာမူ မည်သူမျှ မသိနိုင်တော့သော လျှို့ဝှက် ဆန်းကြယ်မှုပင် ဖြစ်နေပေတော့သည်။ ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ ဆရေး (Surrey) နယ်တွင် ကွယ်လွန်သွားသည်။ မစ္စတာ ဘင်ဂလေ၏ ကိုယ်ကာယမှာ ထူးထူးခြားခြား အရပ်ရှည်ခြင်း မရှိချေ။ သို့သော်လည်း မျက်နှာရှည်ရှည်နှင့် ပိန်ပိန်ပါးပါး ဖြစ်သည်။
ကနဦး သိရှိရသော အထောက်အထားများက ဘင်ဂလေနှင့် ဦးစောသည် ဆက်ဆံရေး အလွန်ကောင်းခဲ့ကြောင်း ပြဆိုနေသည်။ ဦးစောသည် သြဂုတ်လ ၂၂ နှင့် ၂၃ ရက်နေ့ အထိ နေ့စွဲများ တပ်ထားသော စာနှစ်စောင် ဘင်ဂလေထံ ရေးခဲ့သည်။ သူသည် ငွေ ထပ်မံ တောင်းဆိုလိုက်ပြီး ကပ္ပတိန် ဗီဗီယန်းဟု ယူဆသူ တဦးကိုလည်း 'VV' (ဗွီဗွီ) ဟု စာထဲတွင် ရည်ညွှန်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုစာများက သူ့လွတ်မြောက်ရေး မျှော်လင့်ချက်ကို ပြောဆိုခဲ့ရုံ သာမက ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပ နိုင်ငံတကာရှိ ရိုက်ခတ်မှုများ ဖြစ်သွားစေနိုင်သော ထုတ်ဖော်မှုများ ပြုလုပ်မည့် ခြိမ်းခြောက်မှုများပင်လျှင် ပါရှိလာခဲ့သည်။ ဦးစောက စာသယ်ဆောင်လာသူကို ယုံကြည် စိတ်ချရကြောင်းလည်း ဘင်ဂလေကို အာမခံချက် ပေးထားသည်။
ဂဠုန်ဦးစောသည် ထောင်ထဲရောက်ခါစ စောစောပိုင်း ရက်များတွင် သူနှင့် တထောင်ထဲ ရှိနေသော အတူ စွပ်စွဲခံရသူများအား ဆက်သွယ်၍ သူ့ဘက်တွင် ဘုရင်ခံဟောင်း သုံးဦးနှင့် အင်္ဂလန်ရှိ ဝန်ကြီးဟောင်း အများအပြား ရှိနေသည့် အတွက် စိုးရိမ်စရာ မရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် သြဇာတိက္ကမ အလွန်ရှိပြီး သူတို့အပေါ် ဒုက္ခမရောက်အောင် ကြည့်ရှုမည့် မြန်မာပြည်ရှိ အရပ်မြင့်မြင့်နှင့် မိတ်ဆွေ အကြောင်း ဦးစောက ဖော်ပြလာခဲ့သည်။ သူ၏ စာတစောင်တွင် ဗီဗီယန်းအား ၎င်းအရပ်မြင့်မြင့် မိတ်ဆွေ အကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဗီဗီယန်းက ၎င်း၏ ပြန်စာတွင် လောလောဆယ်၌ ယင်း အရပ်မြင့်မြင့်နှင့် မိတ်ဆွေအား အမှုထဲ ဆွဲမသွင်းရန် (ထပ်မံ - မသွင်းရန်) အကြံပေးခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။
ဒေါ်မန်စမစ်၊ ဆာ ရီဂျင်နယ် ဟျူး (Dorman-Smith, Sir Reginald Hugh)၊ ၁၈၉၉ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး (၁၉၃၅-၄၁) ခုနှစ်များတွင် ကွန်ဆာဗေးတစ် (Conservative MP) အမတ် ဖြစ်ခဲ့၍၊ ဗြိတိသျှ ဝန်ကြီးအဖွဲ့ အတော်များများတွင် ဝန်ကြီး အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် လည်းကောင်း တာဝန် ယူခဲ့ဖူးသည်။ (၁၉၄၁-၄၆) ခုနှစ်များ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘုရင်ခံ တဦး ဖြစ်ကာ ဦးစောနှင့်လည်း များစွာ အကျွမ်းဝင်သူ တဦး ဖြစ်သည်။ ထိုနောက် ဗြိတိသျှ အမျိုးသားရေး ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်းသို့ ပြန်မဝင်သော်လည်း ဟန့်ရှိုင်းယားနယ် တာဝန်ယူရသော အဆင့်မြင့်ရဲမှူး (High Sheriff of Hampshire) နှင့် ပြေငြိမ်းရေး တာဝန်ခံ (JP) အလုပ်များ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။
၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင် ဆာရဲလ်ဂျီနယ် ဒေါ်မန်စမစ် (Sir Reginal Dorman-Smith) သည့် ဆာအာချီဘော ကော့ခ်ရိန်း (Sir Archibald Cochrane) ၏ မြန်မာပြည် ဘုရင်ခံ နေရာကို ဆက်ခံသောအခါ ဦးစောနှင့် အဆင့်မြင့် ကွန်ဆာဗေးတစ် ဗြိတိသျှ အာဏာပိုင်တို့ ဆက်နွယ်မှုမှာ ပိုမို ခိုင်မာသွားလေသည်။ ဆာရဲလ်ဂျီနယ်မှာ အသက် ၄၂ နှစ်သာ ရှိသေးပြီး ဦးစောထက် တနှစ်ခန့်သာ ကြီးလေသည်။ မကြာမြင့်မီ သူတို့ နှစ်ဦးသည် တကယ့် မိတ်ရင်းဆွေရင်းများ ဖြစ်သွားကြလေသည်။ ထို့ကြောင့် ၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပရမည် ဖြစ်သော အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကို ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ခြင်းဖြင့် ဆာရဲလ်ဂျီနယ်က သူ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် အရ ဦးစော၏ သက်တမ်းကို နောက်ထပ် ၅ နှစ် သက်တမ်း တခုသို့ တိုးပေးလိုက်လေသည်။ ထို့နောက် ဦးစောကို 'ဆာဝင်စတန် ချာချီ' (Sir Winston Churchill) အပြင် အခြား ဗြိတိသျှ ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရန် အတွက် လန်ဒန်သို့ ဖိတ်ခေါ်ခွင့် ပြုလိုက်လေသည်။
ထို့အပြင် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီး ပြီးနောက် ဂဠုန်ဦးစောအား မြန်မာနိုင်ငံရေး လောကသို့ ပြန်လည် ခေါ်ယူပြီး နေရာပေးခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဘုရင်ခံ၏ ကိုယ်ရံတော် အဲရစ် ဘက်တာစဘီ (Eric Battersby) (အေဒီစီ ၁၉၄၂) အား ဘီဘီစီ (၂) တီဗွီ အစီအစဉ် [ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရသည့် အနှစ် (၅၀) မြောက် အဖြစ် "အောင်ဆန်းကို အမှန်တကယ် ဘယ်သူသတ်သလဲ" မှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်ကို ရိုက်ကူးပြီး ဘီဘီစီ (၂) တီဗွီမှာ ၁၉၉၇ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်တွင် ဗြိတိန်၌ ထုတ်လွှင့် ပြသခဲ့သော တင်ဆက်မှု] က တွေ့ဆုံ မေးမြန်းရာမှာ၊ "ဦးအောင်ဆန်း၏ အစွန်းရောက် အယူအဆများ စွန့်လွှတ် သွားစေရန် ဦးစောက လွှမ်းမိုး လုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည် ဟူသော မျှော်လင့်ချက်နှင့် (ဆာဒေါ်မန်စမစ်က) ကျွန်ုပ်အား (ဦးစောကို ပြန်ခေါ်လာရန်) စေလွှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ သက်သက်မဲ့ ရူးတာပါ၊ ဒါဟာ လွယ်လွယ်လေး ဘယ်ဖြစ်နိုင်မလဲ။ ဦးစောဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သြဇာအာဏာ မရှိတော့ပါဘူး၊ ဦးအောင်ဆန်းကသာ ချုပ်ကိုင်ထားတာပါ" ဟု ပြောပြသည်။
ထို့အပြင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် နိုင်ငံ့ ခေါင်းဆောင်ကြီးများ လုပ်ကြံမှုဖြင့် ဂဠုန်စောနှင့် အပေါင်းပါများကို တရားစွဲနေစဉ်မှာ၊ "ဆာဒေါ်မန်စမစ်ကတော့ နောင်တမရသေးဘဲ နောက်မှ မိတ်ဆွေ တဦးစီ စာရေးလိုက်တာက ကျုပ်တို့က အောင်ဆန်းရဲ့ သူလောက် အရေးမပါတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို ဆွဲကြိုး ချပြီးသားပဲ။ ဒါကြောင့် သူက ဘယ်အကြောင်းကြောင့် ဂျူရီရှေ့မှာ အခွင့်အလမ်း မယူနိုင်သလဲ ဆိုတာ ကျုပ် နားမလည်နိုင်ဘူး။ သူ့ကို သေစားသေစေ စီရင်ချက်ချရင် ကျုပ်တို့က သနားကရုဏာ ပေးဖို့ သေချာမှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလို အခြေအနေပေါ်မှသာ အရေးယူနိုင်မှာ" ဟု လူတွေ့ မေးမြန်းခံရသူ အဲရစ်၊ ဘက်တာစဘီက ပြန်ပြောင်း ပြောပြသွားသည်။
သို့သော်လည်း ဦးစောနှင့် သူ့လူ ၈ ယောက် တရားရုံးတင်သည့် အချိန်မှာ ဒေါ်မန်စမစ်က သူ့မိတ်ဆွေကို တရားခံဘက်မှ သက်သေခံရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့သော်လည်း ဗြိတိသျှ အစိုးရက အဟန့်အတား လုပ်ခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင် ဦးစောအား သေစားသေစေ အစီရင်ပေးသည့် အချိန်မှာလည်း ဒေါ်မန်စမစ်က ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမ္မတကြီးထံ ဦးစောအား သနားညှာတာမှု ပေးရန် ဝင်ရောက် စွက်ဖက်ခဲ့သေးသည်။
ဘီဘီစီ (၂) တီဗွီ အစီအစဉ်မှာပဲ၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ မေလအတွင်း ကြိုးပေးတဲ့နေ့က ရန်ကုန်မှာ ရှိတဲ့ ဗြိတိန် သံအမတ်က ဝှိုက်ဟောသို့ လျှို့ဝှက် ကြေးနန်းစာ တစောင် ရေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ကြေးနန်းစာဟာ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ခန့် မပေါက်ကြားသင့်သည့်စာ အဖြစ် ထိန်းသိမ်းထား ခံခဲ့ရပါတယ်။ လအနည်းငယ် အကြာမှာ နိုင်ငံခြားရေးရုံးက ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ သုတေသနမှူးထံ ၎င်းစာအား ထုတ်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ယင်းကြေးနန်းစာက ရဲအကြီးအကဲက သံအမတ်ကို ပြောပြချက်အား ထုတ်ဖော်ထားပါတယ်။
"လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်မှုမှာ ဗြိတိသျှတို့ ပူးပေါင်း ကြံစည်မှု ရှိတယ် ဆိုတာ ကျနော်တို့ တကယ့်ကို ယုံကြည်နေကြောင်း။ ရဲအကြီးအကဲက ဆာရယ်ဂျီနယ် ဒေါ်မန်စမစ်ကို သံသယရှိသူ အဖြစ် ထောက်ပြခဲ့ကြောင်း။ ကြားအတွင်း လှုပ်ရှားသူမှာ ရန်ကုန်ရှိ ဗြိတိသျှ ကောင်စီမှ ဘင်ဂလေ (Bingley) ဟု ခေါ်သည့် လူဖြစ်သည်ဟု သူ ယုံကြည်ကြောင်း" တင်ဆက်သွားသည်။
ဒိန်း၊ ဗိုလ်မှူး ပီတာအားနက် လန့်စ်လော့ (Daine, Major Peter Ernest Lancelot)၊ ၁၉၂၃ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ အိန္ဒိယ အချက်ပြ ဆက်သွယ်ရေးတပ်၌ ၁၉၄၄ မှ စတင်၍ အရာရှိ အဆင့်ကို ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် ဗမာ့ စစ်ဦးစီးဌာနချုပ် ထောက်လှမ်းရေးတပ်၌ တာဝန် ထမ်းဆောင်လျက်၊ မင်္ဂလာဒုံ မြောက်ဘက်ရှိ ပင်မ ခဲယမ်းမီး ကျောက်တိုက်၏ တပ်မှူးလည်း ဖြစ်သည်။ ဦးစော တပည့်များ ထုတ်ယူသွားသော လက်နက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သူ့အား ဖမ်းဆီးခြင်း မရှိ။
မိုး၊ ဗိုလ်မှူး ဂျေ၊ အေ၊ (Moore, Major J.A.)၊ ၁၉၀၈ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားသည်။ အိန္ဒိယ တပ်မတော်၏ လက်နက်ကြီးတပ်မှ အရာရှိ တဦးဖြစ်ပြီး၊ ဗိုလ်တထောင်ရှိ ပင်မ ခဲယမ်းမီးကျောက်တိုက်၏ တပ်မှူးဖြစ်ပါလျက် ဦးစော တပည့်များ ထုတ်ယူသွားသည့် လက်နက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သူ့ကို ဖမ်းဆီးခဲ့သော်လည်း ပြစ်ဒဏ် ကျခံရခြင်း မရှိ။
ဗီဗီယန်း၊ ကပ္ပတိန် ဒေးဗစ် (Vivian, Captain David)၊ ၁၉၃၂ ခုနှစ်တွင် စတင် အရာရှိ ဖြစ်လာသည်။ အိန္ဒိယ တပ်မတော်မှ မြန်မာ လက်နက်ကိုင် ပုလိပ် တပ်ဖွဲ့သို့ လက်နက် အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန် လွှဲပြောင်းခြင်း ခံရလျက်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်တွင် အဖမ်းခံရပြီး လက်နက်များ ရောင်းချမှုဖြင့် စွဲချက် တင်ခံရသည်။ ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်နှင့် ရူပီး ငါးထောင် ငွေဒဏ်၊ ၂ ခု ပူးတွဲ အပြစ်ပေး ခံရသည်။ သို့သော် ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ အင်းစိန်ကို ကရင် လက်နက်ကိုင် သူပုန်တပ်များ သိမ်းပိုက်ရာတွင် လွတ်မြောက်ခဲ့သဖြင့် ကရင့် တော်လှန်ရေးသမားများနှင့် ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ထို့နောက် အလယ်ရိုးမမှ တဆင့် အရှေ့ရိုးမ တောတွင်း လက်နက်ကိုင် ကရင်စခန်းများသို့ ရောက်သွားရာမှ ၁၉၅၀ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် ထိုင်းနယ်စပ် အနီးရှိ ကော့ကရိတ် နယ်မြေအတွင်း လယ်တဲတခု၌ ကရင့် တော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင် စောဘဦးကြီးနှင့် အတူ ခေတ္တ စခန်းချနေခိုက် ဗမာ့ တပ်မတော်နှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ကာ အသတ်ခံရသည်ဟု မြန်မာ အာဏာပိုင်များက ယူဆခဲ့သော်ငြားလည်း အမှန်စင်စစ် ထိုနေ့က ထိုနေရာတွင် သူမရှိခဲ့ပါ။ ၁၉၅၀ နှစ်လယ် ခန့်၌ ထိုင်းနိုင်ငံမှတဆင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ ပြန်သွားသည့် အချိန်အထိ သူသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကရင် တော်လှန်ရေးသမားများနှင့် လွတ်မြောက် နယ်မြေများ အတွင်း နေထိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၁၉၈၀ ခုနှစ် အတွင်း ဝေလနယ်၊ ဆွမ်စီးမြို့တွင် ကွယ်လွန် သွားခဲ့သည်။
ကပ္ပတိန် ဗီဗီယန်း၏ ဖြောင့်ဆိုချက် တခု၊ "သူဤသို့ ဖြစ်ရခြင်းမှာ သူတို့က ကလောမြို့ တပ်စခန်း အနီး စစ်သားများ စီးနင်းလာသော ရထားတစင်းကို ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလအတွင်း မိုင်းဗုံးဖြင့် ဖောက်ခွဲခံရသဖြင့် သူ့ ရဲဘော် အတော်များများ အသက်ဆုံးရှုံးရသည့် အကြောင်းကို တရားသူကြီး ဦးသောင်းစိန် (အကျဉ်းဦးစီးဌာန မင်းကြီး) အား နောက်ကြောင်းလှန်၍ ဆက်လက် ပြောဆိုပြခဲ့သည်။ ဤသို့သော အကောက်ကြံ ဖျက်ဆီးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယ ရှိခံရသူများမှာ 'ပြည်သူ့ ရဲဘော်' တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြပြီး ထိုပြည်သူ့ရဲဘော် တပ်ဖွဲ့မှာ တကယ်တမ်းအားဖြင့် ဦးအောင်ဆန်း၏ ကိုယ်ပိုင် ပြည်သူ့စစ် အဖွဲ့ ဖြစ်လေသည်။ သေဆုံးသူ၊ ဒဏ်ရာရသူ စစ်သားများမှာ ဝေလ ရဲဂျီးမဲင့်၏ တပ်ရင်း (၂)၊ တပ်ခွဲ (က) မှ ဖြစ်ကြပြီး ဝေလနယ်သား ဖြစ်သူ ဗီဗီယန်း အနေဖြင့် ယင်းအဖြစ်အပျက် အတွက် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း အပေါ်၌ ခါးခါးသီးသီး နာကြည်း ခံစားမိသည်ဖြစ်ရာ နောက်ဆုံး အကျိုးဆက် အားဖြင့် သူသည် ဦးအောင်ဆန်း၏ အဓိက ပြိုင်ဘက်ကြီး ဖြစ်သော ဦးစောနှင့် မဟာမိတ် ဖွဲ့မိခြင်း ဖြစ်လေတော့သည်။"
ထို့အပြင် ဗိုလ်တထောင်နှင့် အခြား လက်နက် သိုလှောင်ရုံတို့မှ လက်နက်များ ရယူနိုင်ရေး အတွက် ရဲအဖွဲ့၏ စာရွက်စာတမ်း အတုများ ပြုလုပ်ပေး ခဲ့သူမှာလည်း ကပ္ပတိန် ဗီဗီယန်း ဖြစ်သည်။
ကရင် တော်လှန်ရေး နယ်မြေတွင် နေထိုင်စဉ် ကာလ၌ ဤထူးဆန်းလှသော ဗြိတိသျှ ကပ္ပတိန်နှင့် နီးနီးကပ်ကပ် ရှိခဲ့ကြသော ကရင် သူပုန်များ အနေဖြင့် သူ့အား အမြဲငေးငိုင်ကာ မိတ်ဆွေဖွဲ့ရန် ခက်ခဲသော လူတယောက် အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ဦးအောင်ဆန်း တို့ကို့ လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်မှုနှင့် ပတ်သက်သော မည်သည့် အကြောင်းအရာကိုမျှ ပြောဆိုလိုစိတ် အလျှင်းမရှိသူ တဦး အဖြစ် လည်းကောင်း မှတ်မိ နေကြသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရသည့် အနှစ် (၅၀) မြောက် အဖြစ် ဘီဘီစီ (၂) တီဗွီ အစီအစဉ် တင်ဆက်သူက သူတို့ သုတေသနပြု တွေ့ရှိချက်တွေကို ဖော်ထုတ် တင်ဆက်ရာမှာ၊ ဗိုလ်ကြီး ဒေးဗစ်ဗီဗီယန်း (Vivian, Captain David) သည် ကရင့်လှုပ်ရှားမှုတွင် လည်းကောင်း၊ ဦးစော၏ ပူးပေါင်း ကြံစည်မှုတွင် လည်းကောင်း ပါဝင် ပတ်သက်နေသူ နောက်တဦး ဖြစ်သည်။ ၁၉၅၄ ခုနှစ်တိုင်အောင် ကရင်များနှင့် အတူ တိုက်ခိုက်ခဲ့သော နေ့ရက်ဟူသော သူ၏ နေ့စဉ် မှတ်တမ်းနှင့် ဂျွန်မော်ဂင် (John Morgan) ဟူသော နာမည်ဖြင့် အထောက်အထားတုများ အသုံးပြုကာ ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဗြိတိန်သို့ သူပြန်လာခဲ့ခြင်းကို ဘီဘီစီမှ သုတေသနပြု သူများက ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဗိုလ်ကြီး ဗီဗီယန်နှင့် ပတ်သက်သော မှတ်ချက်များ နိုင်ငံခြားရေးရုံးမှ ဖိုင်တွဲများမှာ အဖျက်အဆီး ခံရပုံရသည်။ ဘန်ကောက်ရှိ ဗြိတိသျှ သံရုံးက "သူသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထောင်ကျခံရမှုမှ ရှောင်ပြေးလာခဲ့ကြောင်း သိရှိခဲ့သည်" ဟူသော အချက်ကို အညွှန်းဇယား တခုက ပြသခဲ့သည်။ စောစောပိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထောင်ကျခဲ့စဉ်က "ဗြိတိန်က တစုံတယောက်က ကျနော့်ကို ဖယ်ရှားချင်နေတယ်။ စကားပြောခွင့်လဲ မပေးခဲ့ဘူး။ အချက်အလက်တွေကို ကျနော် ပြောလိုက်ရရင် အထူးသဖြင့် ဗြိတိသျှတွေနဲ့ မြန်မာတွေ အကြား အကြီးအကျယ် ဆူပွက်ကုန်လိမ့်မယ်" ဟု သူက ဗြိတိသျှ အာဏာပိုင်များကို ပြောဆိုခဲ့သည်။
ယမ်း၊ ဗိုလ်မှူး စီဟင်နရီ (Young, Major C. Henry)၊ အိန္ဒိယ တပ်မတော် လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှု အင်ဂျင်နီယာ အလုပ်ရုံတပ်ခွဲ၏ တပ်မှူး တဦးဖြစ်၍ ဦးစောကို လက်နက် ပေးကမ်းခဲ့မှုဖြင့် ၁၉၄၇ ခု၊ သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် အဖမ်းခံရပြီး၊ ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် အပြစ်ပေးခံရသော်လည်း အသနားခံစာ တင်သဖြင့် လွှတ်ပေးခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ချက်ချင်း ထွက်ခွာ သွားခဲ့ပါသည်။
စစ်ဆေး မေးမြန်းရာတွင် သူနှင့် ဦးစော ဆက်နွယ်မှု ရှိနေသည်ကို မေဂျာ ယမ်းက အလွယ်တကူပင် ဝန်ခံခဲ့သည်။ ဂဠုန်တပ်၏ အကြီးအကဲ ဖြစ်သော ဦးစောနှင့် အင်းလျားကန်ခြားလျက် သူ နေထိုင်ခဲ့သည်။ ဦးစောသည် မေဂျာ ယမ်းနှင့် အချိန် အတော်ကြာကြာကြီး နီးနီးကပ်ကပ် ဆက်သွယ်မှု ရှိခဲ့သည်။ တချိန်တွင် အေဒီလမ်းရှိ သူ့ နေအိမ်၌ ကျင်းပသော ပါတီပွဲသို့ ယင်းဗြိတိသျှ အရာရှိ တက်ရောက်ခဲ့ဖူးသည်။ ထိုပါတီပွဲသို့ ဗီဗီ ယန်းလည်း ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထိုပါတီပွဲ၌ ဦးစောနှင့် ဗြိတိသျှ ကောင်စီမှ 'ဘင်ဂလေ' ဆိုသူကို မေဂျာယမ်းက မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် ဘင်ဂလေက ဦးစောကို "ကျနော်တို့ ခင်ဗျားကို အပြည့်အဝ ကူညီဖို့ ပြင်ဆင်ထားပြီးပါပြီ" ဟု အသံကျယ်ကြီးဖြင့် အာမခံချက် ပေးခဲ့ကြောင်း ယမ်းက ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဦးထွန်းလှအောင်သည် ဗီဗီယန်းထံ ဦးစောက ပေးပို့သော လျှို့ဝှက် သင်္ကေတဖြင့် ရေးထားသည့် မိတ္တူများကို ဗြိတိသျှ မေဂျာအား ပြလိုက်သည်။ မေဂျာယမ်းသည် အံ့သြလောက်အောင်ပင် ဤလျှို့ဝှက် ဆန်းကြယ်မှုကို ဖြေရှင်း ပြတော့သည်။
♦ 'တဈေက ညတိုင်း ထော့နင်း ထော့နင်း ဖြစ်နေသည်' - မေဂျာယမ်းက သူ့အိမ်မှာ ထော့နင်း ထော့နင်း ဖြစ်နေသော တဈေ အခြောက်ခံရသည်ဟု နာမည်ကြီးနေကြောင်း ရှင်းပြသည်။
♦ 'ငှက်ပျောသီးအစိမ်းနဲ့ ဧည့်ခံ' - ဦးစော၏ ပါတီပွဲတွင် တည်ခင်း ဧည့်ခံသော ငှက်ပျောသီး အမျိုးအစား ဖြစ်သည့် အစိမ်းရောင် သီးမွှေး ငှက်ပျောသီး အရှည်များကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။
♦ 'သံပုရာရည်မှာ ဒေးဗစ်၏ အချစ်ဆုံး' သည် ဒေးဗစ်မှာ အခြားသူ မဟုတ်ဘဲ ဗြိတိသျှ မေဂျာ၏ သားအငယ် ဖြစ်သည်။ သူသည် သံပုရာရည်ကို ကြိုက်နှစ်သက်ပြီး ပါတီပွဲများတွင် ယင်းကိုသာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် သောက်သုံးသူ ဖြစ်သည်။
ကာတစ်၊ ဘင်နစ်, ဆာ ဖရက်ဒရစ် ဟင်နရီ (ဒဲရက်) ကေစီ (Curtis- Bennett, Sir Frederick Henry (Derek) KC၊ ၁၉၀၄ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ဘုရင့် ဥပဒေ အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်၍ ရာဇဝတ်မှုခင်းများတွင် အောင်မြင် ကျော်ကြားသော ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ရှေ့နေ တဦးဖြစ်သည်။ အထူးခုံရုံးတော်တွင် တရားပြိုင်ရာ၌ သူ့ကို ကာကွယ်ခုခံရန် အကြီးတန်း အကြံပေး အဖြစ် ဦးစောက ငှားရမ်း ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် သူနေထိုင်ရာ လန်ဒန်တိုက်ခန်းထဲတွင် သေဆုံးလျက် ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ ရင်ခွဲ စစ်ဆေးသူ ဆရာဝန်က လွန်ခဲ့သည့် ၄/၅ ရက်ကပင် သူ သေဆုံးပြီး ဖြစ်သည်ဟု ထင်မြင်ချက် ပေးသည်။ သို့ဖြစ်လျှင် သူသေဆုံးရက်သည် နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားလျက် သေဒဏ် ကျခံခဲ့ရသော သူ၏ အမှုသည် ကျူးလွန်ခဲ့သော ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက် အမှု (၉) နှစ် ပြည့်မြောက်သည့် နေ့ရက်ခန့်တွင် ဖြစ်နေပေတော့သည်။
ဗာတန်န (စ်), ဘင်ဂျမင်ရာဖေးရယ် (Vertannes,Benjamin Raphael)၊၊ ယခင်က စစ်တပ်မှ ဗိုလ်ကြီးတဦး ဖြစ်၍၊ ထို့နောက် ရန်ကုန်မြို့ရှိ တရားလွှတ်တော်တွင် ရှေ့နေ ဖြစ်လာပြီး၊ ဦးစော အတွက် ခုခံကာကွယ် ပေးခဲ့သည့် အငယ်တန်း ဥပဒေ အကြံပေး ဖြစ်ခဲ့သည်။ မူလဇာတိ အားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဖြစ်သော်လည်း လွတ်လပ်ရေး ရပြီးသည့် အခါ အငြိမ်းစားယူ၍ ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ ရွှေ့ပြောင်းသွားခဲ့သည်။
လျှိုဝှက် ဆန်းကြယ်သည့် ဖြစ်ရပ်များနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ
ဗြိတိသျှတို့ထံမှ အာဏာ လွှဲပြောင်းယူရေး ကြိုးပမ်း နေဆဲ ကာလ၌ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရည်အချင်း အမြင့်မားဆုံး ခေါင်းဆောင်များမှာ နိုင်ငံတော် အချုပ်အခြာ အာဏာ ရရှိပြီး လွတ်လပ်ရေး မကြေညာနိုင်မီပင် အသက်ဆုံးရှုံး သွားခဲ့ရသည့် လူမသမာတို့၏ အကွက်ကျကျ စီစဉ် လုပ်ကြံခဲ့မှုကြီးတွင် ရုံးတော်၏ နောက်ဆုံး စီရင်ချက်ထက် ကျော်လွန်ပြီး ကြိုးပမ်းမိသူ အချို့မှာ သက်ဆိုး မရှည်ကြပေ။
တု(ခ်)၊ ကောလင်း (Tooke, Colin)၊ ရန်ကုန်အနီးရှိ ဟံသာဝတီမှ ခရိုင် ရဲဝန်ထောက်ဟောင်း တဦး ဖြစ်သူသည် ဤခုံရုံး၏ စစ်ဆေးမှု ပြီးသည့်နောက် ဦးစော၏ အမှုကို လျှို့ဝှက်စွာ စတင် စုံစမ်း ထောက်လှမ်းခဲ့သည်။ တစုံတခု မှားယွင်းနေပြီဟု သူထင်ခဲ့သည်။ တနေ့ သူအိမ်ပြန် ရောက်သောအခါ သူ့ ဗမာအိမ်ဖော်က သူ့အယ်လ်ဇေးရှင်း ခွေးကြီးမှာ ခွေးရူး ပြန်နေပြီဟု ပြောခဲ့သည်။ သို့ဖြင့် သူ့ခွေးကို သူ သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်လိုက်ရပြီး၊ သူ့ခွေးမှာ အနီးရှိ မြစ်ကမ်းဘေးတွင် လဲသေနေလေပြီ။ တု (ခ်) မှာ ယုံကြည်၍ မရနိုင်အောင် ဖြစ်နေသည်။ ထုံးစံအားဖြင့် ခွေးရူးပြန်ရောဂါမှာ အချိန်အတန်ကြာ စတင် ဖြစ်ပွားရမြဲဖြစ်ပြီး ထိုနေ့ နံနက်ကပင် သူ့ခွေးမှာ အကောင်းပကတိ ဖြစ်နေသည် မဟုတ်ပါလား။ သို့ဖြစ်၍ တု (ခ်) သည် သူ့ခွေး၏ ခေါင်းကို ဖြတ်ကာ ရန်ကုန်မြို့ရှိ တိရစ္ဆာန်ကု ဆရာဝန်ထံ ယူသွားပြီး စစ်ဆေးကြည့်ရာ တိရစ္ဆာန်ကု ဆရာဝန်က သူ့ခွေးတွင် ခွေးရူးပြန် ရောဂါ မရှိကြောင်း အတည်ပြုခဲ့သည်။ ထို့နောက် သူ့အိမ်ကို ဖောက်ထွင်းခံခဲ့ရပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရမှုနှင့် ပတ်သက်သော သူ၏ စာရွက်စာတမ်း ဖိုင်တွဲများ ပျောက်ဆုံး သွားခဲ့ရပြန်သည်။ ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ် ကြာပြီးနောက် အစာ အဆိပ်သင့်ပြီး တု(ခ်) သည် ဆေးရုံတွင် သေဆုံး သွားခဲ့လေတော့သည်။
ဦးစော အမှုနှင့် ဆက်နွယ်လျက် အဆန်းတကြယ် သေဆုံးခဲ့ရသူ နောက်တဦးမှာ ဦးတင်ထွဋ် ဖြစ်သည်။ သူသည် ဦးအောင်ဆန်း၏ လုံးဝ ယုံကြည်မှုကို ခံရသော တဦးတည်းသော ဗျူရိုကရက် အရာရှိ ဖြစ်သည်။
ဦးတင်ထွဋ်၊ ၁၈၉၅ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားသည်။ ဒါးလ်ဝစ်ခ်ျ ကောလိပ် (Dulwich College) နှင့် ကိန်းဘရစ် တက္ကသိုလ် (Cambridge University) တို့တွင် ပညာ သင်ကြားခဲ့သည်။ အိန္ဒိယ ပဋိညာဉ်ခံဝန်ထမ်း (ICS) တဦးဖြစ်ပြီး၊ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်၏ ဒု-အဓိပတိ (Vice-Chancellor) ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒိုင်အာခီခေတ်နှင့် (၉၁) ဌာနခေတ်များ၌ ဝန်ကြီးအဖွဲ့ အတော်များများတွင် အတွင်းဝန်ချုပ် အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သူ၏ အစ်ကိုမှာ တရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ တရား ဝန်ကြီးချုပ် ဦးကျော်မြင့် ဖြစ်သည်။
မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေး ရရှိပြီး ပထမဆုံး အစိုးရ အဖွဲ့တွင် ဦးတင်ထွဋ်သည် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ သို့သော် ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် နုတ်ထွက်ခဲ့ပြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် ရာထူးဖြင့် အရန် လက်နက်ကိုင်တပ်များ၏ စစ်ဦးစီးချုပ် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ့ ထိပ်တန်းအကြီးတန်း ဝန်ထမ်းတဦးနှင့် အစိုးရ အဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီး တဦးအား စစ်တပ်မှ မြင့်မားလှသော ရာထူး တခုသို့ ပေးအပ်ခံရခြင်းမှာ ထူးဆန်းကောင်း ထူးဆန်း နေပေလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း သူ၏ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းမှု ဘဝသည် စစ်မှုထမ်း ဘဝမှ စတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ကို တော်တော်များများ မသိကြချေ။
သူသည် အိန္ဒိယရှိ အင်ဒို စစ်တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရခဲ့ပြီး အိန္ဒိယ ပဋိညာဉ်ခံ ဝန်ထမ်းဘဝသို့ ဝင်ရောက်ရန် အတွက် စစ်တပ် အရာရှိ ရာထူးကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သမ္မတ နိုင်ငံတော်သစ် အနေဖြင့် ပြည်တွင်းစစ်မီး တောက်လောင်ပြီး ပျက်စီးလုနီးပါး အခြေအနေသို့ ဆိုက်ရောက် နေချိန်တွင် စစ်မှုထမ်းဟောင်းများကို ရနိုင်သလောက် ပြန်လည် စုစည်း၍ ခိုင်မာသည့် ပြည်ထောင်စု အရန် တပ်မတော် (Union Auxiliary Forces) ဖွဲ့စည်းရေး လေးလံလှသည့် တာဝန်ကြီးကို သူ့ဖာသာ ကမ်းလှမ်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ 'The New Times of Burma' သတင်းစာကို စတင် ထူထောင်သူနှင့် ယင်း၏ အယ်ဒီတာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူသည် တရားသူကြီး ဦးကျော်မြင့်၏ အကိုလည်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဖြစ်နေခဲ့သည်။ ထို့အပြင် သူ့သတင်းစာတွင် အသုံးပြုရန် အတွက် ဦးစော၏ အမှုကို ထိုအချိန်က ဦးတင်ထွဋ်သည် စူးစမ်း လေ့လာ နေခဲ့သည်ဟု အများက ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။
၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ အတွင်း တည၌ ဦးတင်ထွဋ်သည် စပတ်လမ်းရှိ သူ့သတင်းစာတိုက် ရုံးခန်းမှ ကားဖြင့် ထွက်ခွာရာ ပေါက်ကွဲစေနိုင်သော ကိရိယာ တခုက သူ့ကား အတွင်း ပေါက်ကွဲသွားသည်။ ဆီဒင်ကား အတွင်းရှိ ကားမောင်းသူနှင့် အစောင့် ဂေါ်ရခါး နှစ်ဦး (တဦးမှာ သူ့ဘေးတွင် ထိုင်နေသည်) မှာ ချက်ချင်းပင် သေဆုံး သွားခဲ့သည်။ ဗိုလ်မှူးချုပ် အနေဖြင့် သေလောက်အောင် ဒဏ်ရာရသွားပြီး၊ သိပ်မဝေးလှသော ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီးသို့ တက်သုတ်ရိုက် ပို့ကြသော်လည်း ဆေးရုံကြီးရောက်ပြီး သိပ်မကြာမီမှာပင် သေဆုံး သွားလေသည်။ သဘာဝတရားက ပြက်ရယ်ပြု သကဲ့သို့ပင် လွန်ခဲ့သော တနှစ်ခွဲခန့်က ဦးအောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံခဲ့ရသော အတွင်းဝန်ရုံးကို လှမ်းမြင်နိုင်သည့် နေရာ၌ ဤရာဇဝတ်မှု ဖြစ်ပွားခြင်း ဖြစ်သည်။
ဦးတင်ထွဋ် အသတ်ခံရမှုသည် ဦးအောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရမှုကြီးအား သူက သုတေသန ပြုလုပ်နေခြင်းနှင့် ဆက်နွယ် ပတ်သက် နေသလော၊ သို့မဟုတ် လက်နက်ကိုင်တပ်များ အတွင်း အားပြိုင်နေခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ပါသလော။
၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ အတွင်းက မော်လမြိုင်၌ ပြည်ထောင်စု စစ်ရဲတပ်ဖွဲ့ (Union Military Police) တွင် ဒု-ဗိုလ် အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသော တိုင်းရင်းသား ကရင်နီလူမျိုး (ကယား) ဖြစ်သည့် စောယိုးရူး (Saw Yoo Shoo) သည် သူ၏ ဗြိတိသျှ အရာရှိဖြစ်သူ ဗိုလ်ကြီး မိုက်ကယ်လီလေး (Captain Michael Lilley) ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် သူ့ထံသို့ ရောက်လာပြီး "အောင်ဆန်း မကြာမီ လုပ်ကြံခံရလိမ့်မယ်။ မငြိမ်မသက် ဖြစ်လာခဲ့ရင် မော်လမြိုင်မြို့ကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ အသင့်ပြင်ထားပါ" ဟု ပြောခဲ့သည်ကို ယနေ့ထက်တိုင် မှတ်မိနေသေးသည်။ ဗိုလ်ကြီးလီလေး မည်မျှလောက် ပိုမိုသိထားသည် ဆိုသည်ကို မည်သူမျှ မသိနိုင်တော့ချေ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် သူသည် များမကြာမီ အချိန် အတွင်း မော်လမြိုင်မြို့တွင် ရုတ်တရက် သေဆုံး သွားခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းလှအောင်၊ ၁၉၀၂ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ် အစိုးရလက်ထက် ဘုရင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှင့် မှုခင်း စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ဌာန၏ ဒု-ရဲချုပ်၊ ဦးစောနှင့် သူ့အပေါင်းအပါများကို လျင်မြန်စွာ ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သည့် အတွက် နိုင်ငံတော်၏ လေးစားမှုကို ခံခဲ့ရသည်။ တရားသူကြီးမင်း ဦးသောင်းစိန်နှင့် အတူတွဲ၍ ဦးစော၏ လုံခြုံရေး တာဝန်ကို ယူခဲ့ရသည်။ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက် ရဲချုပ် ဖြစ်လာခဲ့ပြီး၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် သြဂုတ်လတွင် ဗိုလ်ချုပ် ရာထူးဖြင့် ဒု-ဦးစီးချုပ် အဆင့်သို့ တိုးမြှင့်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။
ဦးထွန်းလှအောင်သည် ဆင်း(ဒ်)ဟတ်(စ်) (Sandhurst) ဘုရင့် စစ်ကောလိပ်သို့ ဝင်ခွင့်ရခဲ့သူ ပထမဦးဆုံး မြန်မာ အမျိုးသားဖြစ်ပြီး ၁၉၂၂ ခုနှစ်တွင် သင်တန်းပြီးဆုံး၍ ဘွဲ့ရသည်နှင့် ဘုရင်၏ ရာထူး ခန့်ထားခြင်းကို ခံခဲ့ရသူ ဖြစ်သည်။ သူသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် လန်ဒန်ရှိ မြန်မာသံရုံးသို့ မြန်မာစစ်သံမှူး အဖြစ် စေလွှတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ထိုရာထူးမှာ ယခင်က သူကိုင်တွယ်ခဲ့ရသည့် ရာထူးထက် အဆင့်များစွာ နိမ့်သော ရာထူး ဖြစ်လေသည်။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၌ သူ့တာဝန်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီး သူသည် မိခင်တိုင်းပြည်သို့ ပြန်လာခဲ့သည်။ သို့သော် သူစီးလာသော သင်္ဘော သီဟိုဠ်ကျွန်း (ယခု သီရိလင်္ကာ) ကိုလံဘို ဆိပ်ကမ်း ဆိုက်ကပ်ချိန်တွင် သူ့ကို မြန်မာ ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိများက လာရောက် တွေ့ဆုံပြီး သူကိုင်ဆောင်ထားသော နိုင်ငံကူး လက်မှတ်ကို ပယ်ဖျက် ပစ်လိုက်ကြသည်။ ဤသည်မှာ ရှင်းလင်းပြ၍ မရနိုင်လောက်သော ထူးဆန်းမှု ဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြင့် သူသည် သီဟိုဠ်တွင် ၁၉၅၄ ခုနှစ် အထိ သောင်တင် နေခဲ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဗမာ့ တပ်မတော်၌ အရင်းခံ အဆင့်အမြင့်ဆုံး စစ်တပ် အရာရှိကြီး ၄ ဦး ရှိသည့် အနက် ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ အရောက်တွင်မူ ဦးနေဝင်း တယောက်သာ ကျန်ခဲ့ပေတော့သည်။
လုပ်ကြံမှုကြီးနှင့် ကွဲပြားသည့် အမြင် ၃ ရပ်
၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးနောက် ပထမဆုံး အကြိမ် ကျရောက်သည့် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့ (ဝါ) အာဇာနည်နေ့တွင် အာဇာနည်ကုန်းသို့ စစ်ဝတ်စုံပြည့်ဖြင့် ချီတက်ကြရန် တော်လှန်ရေး ကောင်စီဝင်များ၏ စိတ်ကူးတွင် ပေါ်လာပြီး စီစဉ်ခဲ့ကြသည်။ တပ်မတော် စတင် တည်ထောင်ခဲ့သူ ဦးအောင်ဆန်းသာ အသက်ထင်ရှား ရှိခဲ့ပါမူ ယခု အာဏာသိမ်းမှုကို သဘောတူညီ ပေလိမ့်မည်ဟု ပြည်သူလူထုကို ပြသရန် ဖြစ်သည်။ တော်လှန်ရေး ကောင်စီဝင် ၁၇ ဦး ရှိသည့်အနက် ၁၄ ဦးသည် ထိုချီတက်မှု စီစဉ်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ဗိုလ်မှူးချုပ် တင်ဖေက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သေဆုံးခဲ့ရမှုကို ဝမ်းနည်းတသ ပြောဆိုလိုက်သည်။ ထိုအခါ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းက ထရပ်လိုက်ပြီး … "ဘာလို့ ဝမ်းနည်းနေရမှာလဲ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ လူပျော့တယောက်ပဲ။ ဒါ့အပြင် တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြဿနာတွေ အပေါ် သူ့ထက်စာရင် ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ရမယ် ဆိုတာ ငါ အများကြီး ပိုသိတယ်" ဟု ခပ်ပြတ်ပြတ် ပြောဆိုလိုက်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ အာဇာနည်ဗိမာန်သို့ ချီတက်မည့် မဟာစီမံကိန်းကြီးမှာ ချက်ချင်းပင် ပျောက်ကွယ် သွားခဲ့လေတော့သည်။
ဤသို့အားဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်ကြီးများ လုပ်ကြံခံရပြီးနောက် ဗြိတိန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွင်းတွင် လုပ်ကြံမှုကြီးနှင့် ပတ်သက်၍ အမြင်သုံးမျိုး ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ အတိုချုပ်ဆိုရလျှင် ၎င်းတို့မှာ .…
(၁) တရားဆိုင်မှုသည် တရားမျှတပြီးလျှင် ဦးစောအား အဓိက လက်သည်တရားခံ အဖြစ် ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။
(၂) ဦးစောသည် ဆင်ကွက်ထဲ ဝင်မိခဲ့ပြီး တရားဆိုင်မှု တရပ်လုံးသည် တရားရေး ပြယုဂ်သာ ဖြစ်သည်။
(၃) ဦးစောသည် အပြစ်လည်း ရှိသည့်အပြင် ဆင်ကွက်ထဲသို့လည်း ဝင်မိခဲ့သည်။
ပထမ အမြင်သည် မြန်မာအ များစု ကိုယ်တိုင် ယုံကြည်သော အမြင်ဖြစ်ပြီး မြန်မာ ရဲအာဏာပိုင်များနှင့် စာရေးဆရာများ တင်ပြကြသော တရားဝင် အမြင်တရပ်လည်း ဖြစ်သည်။
ဒုတိယအမြင်မှာ ၁၉၄၀ ခုနှစ်၊ နှောင်းပိုင်းကာလက မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမှုထမ်းခဲ့ဖူးပြီး ယခုအခါ ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိ နေထိုင် နေကြသော ဗြိတိသျှ အရာရှိ အများအပြား၏ စွဲမြဲသော အမြင် ဖြစ်သည်။
တတိယ တွေးခေါ်မှု အမြင်မှာမူ အခြေခံအားဖြင့် ပြည်ပရောက် သဘောထား ကွဲလွဲသူ မြန်မာများအကြား မကြာမီ အချိန်ကမှ ပေါ်ထွက်လာသည့် အမြင် ဖြစ်သည်။
လုပ်ကြံမှုကြီးကို ကျူးလွန်စေခဲ့ရသည့် နောက်ကွယ်မှ အကြောင်းတရားသည် လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်မှုလေး တခုပေလော၊
၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၀) ရက်၊ သာယာလှမောသော ဖလော်ရီဒါ၏ ညနေခင်း တချိန်တွင် ဗမာ့ လက်နက်ကိုင် ပုလိပ် သောင်းကျန်းမှု နှိမ်နင်းရေး တပ်ဖွဲ့ (Burma Armed Police Striking Force) တွင် အမှုထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပေဖူးလွှာ မဂ္ဂဇင်းကို အယ်ဒီတာချုပ် အဖြစ် တာဝန်ယူ ထုတ်ဝေခဲ့သူ၊ ၁၉၉၁ ခုနှစ်က ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီး၌ ကွယ်လွန်ခဲ့သူ ဗိုလ်လက်ျာ၏ ညီငယ် ဦးမြလှိုင် (ဆေးကုသခံယူရန် ၁၉၈၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ကတည်းက အမေရိကန်သို့ ရောက်နေခြင်းဖြစ်) ၏ နေအိမ် ဖလော်ရီဒါ (Florida) ၌ အလုပ်လုပ်နေသော မြန်မာ ဆရာဝန် တဦးဖြစ်သည့် ဒေါက်တာကြင်ဟိုး (ခေါ် ) ဒေါက်တာနိုင်ဝင်းတို့ နှစ်ဦး ညစာ စားသောက်နေချိန်တွင် ၎င်းအကြောင်းအရာတို့ အပေါ် စကား စပ်မိသွားကြသည်။ ဆရာဝန်က မေးခွန်းမျိုးစုံကို အားတက်သရော မေးသည်။ သူ့မိတ်ဆွေက နိုင်ငံရေးသမား တဦးဖြစ်သည့် 'ရန်ကုန်ဘဆွေ' ဟု လူသိများသော သူ၏ တွဲဖက် တဦးပါ၊ ပါဝင် ပတ်သက်ခဲ့သည့် အံ့သြ ရင်ဖိုစရာ ဇာတ်လမ်းတရပ်ကို ဖော်ထုတ် ပြောပြလေတော့သည်။
သူနှင့် ရန်ကုန်ဘဆွေတို့ နှစ်ဦးမှာ ဦးစော၏ အသက်ကို ရန်ရှာသယောင် ကြံစည်နိုင်ရန် အတွက် ၂ လကြာ သင်တန်းပေး လေ့ကျင့်ခံရကြောင်း၊ ထိုသို့ ကြံစည်ခြင်းဖြင့် ဦးအောင်ဆန်းကို သွေးထိုး မြှောက်ပင့်ပေးသူ အဖြစ် အထင်မှား အမြင်မှားစေရန် ဖြစ်ကြောင်း သူက အတိအလင်း ဖွင့်ဟခဲ့သည်။ ဤသို့သော သူရဲဘောကြောင်လှသည့် လုပ်ရပ်အား စည်းရုံး စီမံသူများမှာ အခြားသူများ မဟုတ်။ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းနှင့် သူ၏ အနီးကပ်ဆုံး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်ကြီးတို့သာ ဖြစ်သည်ဟု ဦးမြလှိုင်က ပြောပြခဲ့ပါသည်။
ဒေါက်တာကြင်ဟိုး ပြန်ပြောင်း ပြောပြသည့် ဦးမြလှိုင်၏ ပြောဆိုချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
တနေ့ ကျနော် စစ်ရုံးမှာ အလုပ်ပြီးလို့ အိမ်ပြန်မယ် အလုပ်မှာ ကျနော့် ဆရာ ဗိုလ်အောင်ကြီးက "ကိုမြလှိုင် ခင်ဗျား အိမ်မပြန်နဲ့အုံး၊ ကျနော့်အိမ် လိုက်ခဲ့။ အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတခု ဆွေးနွေးစရာ ရှိတယ်" လို့ ကျနော့်ကို ပြောပါတယ်။ ကျနော် သူနဲ့ လိုက်သွားပါတယ်။ အဲဒီနောက် သူက ကျနော့်ကို မေးတယ်။ "ခင်ဗျားမှာ ငွေ ဘယ်လောက် ရှိသလဲတဲ့"။ ကျနော်က … "ကျနော့်မှာ ငွေတသိန်း၊ နှစ်သိန်းလောက်တော့ ရှိတယ်" လို့ ပြန်ဖြေတော့ သူက … "ကောင်းတယ်၊ ဒါဆို ခင်ဗျားအိမ် အတွက် လုံလောက်တယ်။ ကျနော်တို့မှာ အထူးတာဝန် တခု လုပ်စရာ ရှိတယ်။ ကျနော့် အိမ်မှာ ခင်ဗျားနေ၊ အားလုံး ကိစ္စ ဝိစ္စပြီးရင် ခင်ဗျား အိမ်ပြန်နိုင်တယ်" လို့ ပြောပြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဗိုလ်အောင်ကြီး အိမ်မှာ ကျနော် ၂ လလောက် နေခဲ့ရတယ်။ ရန်ကုန်ဘဆွေကတော့ ဗိုလ်နေဝင်း အိမ်မှာ နေပြီး သေနတ်တလက်နဲ့ အပစ် လေ့ကျင့် နေရတယ်။ လုံးဝ သေချာဖို့ ကျနော်တို့ကို ပိုလေ့ကျင့်ပေးတာပါ။ (တကယ်တမ်းက ရန်ကုန်ဘဆွေက လက်တည့် ပြီးသားပါ)။ ဦးစောရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို ကျနော်တို့ အသေးစိတ် လေ့လာရတယ်။ သူ ရုံးကို သွားဖို့ အိမ်ကနေ ဘယ်အချိန် ထွက်တယ်။ ဘယ်အချိန် ပြန်ရောက်တယ် စသဖြင့်ပေါ့။ ဦးစော အသက်ကို ရန်ရှာဖို့ လုပ်တဲ့နေ့က သူက သူ့အနက်ရောင် ကားကြီးထဲမှာ ဒရိုင်ဘာဘေးက ထိုင်လိုက်လာတယ်။ ကျနော်တို့ သူ့နောက်က ကပ်လိုက်သွားတယ်။ နေရာကောင်းလဲ ရောက်ရော၊ ကျနော်က သူ့ကားကို ကျော်တက်လိုက်တယ်။ အဲဒီ အချိန်မှာ ရန်ကုန်ဘဆွေက သေနတ်ခလုတ်ကို ဆွဲဖြုတ်လိုက်တာပဲ။ ပထမ ပစ်ချက်က ဦးစော နဖူးကို ရှပ်မှန်သွားတယ်။ ဒါအရေးကြီးဆုံး ပစ်ချက်ပဲ။ ရန်ကုန်ဘဆွေက နောက်တချက် ထပ်ပစ်တယ်။ အဲဒါက ဦးစောကို မထိဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ဦးစောက သူ့ထိုင်ခုံအောက် လျှောချလိုက်လို့ပဲ။ တတိယ အချက်ကတော့ မိုးပေါ် ထောင်ပစ်လိုက်တာပါ။ ရန်ကုန်ဘဆွေက … "ဟေး၊ ကိုမြလှိုင်၊ မောင်းပြေးပေတော့" လို့ အော်ပြောလိုက်တယ်။
ကျနော် ဘယ်လောက်မြန်မြန် မောင်းလိုက်လဲ မသိဘူး။ အိမ်ကို ဘယ်လို ပြန်ရောက်လာမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။ သေနတ်ကတော့ ဗိုလ်နေဝင်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင်သေနတ်ပါ။ ရန်ကုန်ဘဆွေနဲ့ ကျနော်တို့ လုပ်ကြံတာကို ဦးစော လုံးဝ မသိခဲ့ပါဘူး။ ဒါကတော့ ကျနော်တို့ ၄ ယောက်၊ ဗိုလ်နေဝင်း၊ ဗိုလ်အောင်ကြီး၊ ရန်ကုန်ဘဆွေနဲ့ ကျနော်တို့ပဲ သိတာပါ။
ဦးအောင်ဆန်း အသတ်မခံရမီ ၁၀ လ အလို ၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ဦးစော အသက်ကို ရန်ရှာခြင်းနှင့် အခင်းဖြစ်ပွားရာတွင် ပြည်သူ့ ရဲဘော်များ ပါဝင် ပတ်သက်နေပုံရခြင်းတို့ကို လုပ်ကြံမှု အတွက် စေ့ဆော်ချက် အဖြစ် တရားဆိုင်နေစဉ် အတွင်းတွင်ပင် ကိုးကားခြင်း ခံခဲ့ရလေသည်။
ခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ် ထုတ်ဝေသူ ဦးတင်မောင်ဝင်းသည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလထုတ် ဂျာနယ်တွင် ဒုတိယအကြိမ် ထုတ်ဝေသော ကျွန်ုပ်၏ စာအုပ် အပေါ်တွင် ခြုံငုံ ရေးသားရာ၌၊
"၎င်းအပြင် ဤဤ ထိုထို အနှီသို့သော ခေါင်းဆောင်တို့၏ နောက်လိုက်ဆိုသူ အချို့တို့သည် မိမိတို့ ဆရာ၏ နိုင်ငံရေး ရန်သူဟု ထင်မှတ်သူများ အပေါ် မိမိတို့ဘာသာ မိမိတို့ အစီအစဉ်ဖြင့် ကြိမ်ဖန်များစွာ ပူးပေါင်း ကြံစည်မှု ပြုလာကြသည်။ စာရေးဆရာ ရန်ကုန်ဘဆွေ ကိုယ်တိုင်က သူနှင့် ဦးမြလှိုင်တို့သည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ ဦးတည်ချက်များ အပေါ် အထင်အမြင် မှားစေရန် ခပ်ရူးရူး၊ ခပ်ရမ်းရမ်း အမြတ်ထုတ် လုပ်ဆောင်မှုများတွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ ၁၉၇၂ ခုနှစ်ပိုင်း၌ ဘန်ကောက်ရှိ မိတ်ဆွေ အဝန်းအဝိုင်း အတွင်းတွင် ဖွင့်ဟ ဝန်ခံခဲ့ဖူးသည်" ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။
၁၉၆၉ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၈ ခုနှစ် အထိ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးနည်း အရ ဦးနု ဦးဆောင်ပြီး မဆလအား တော်လှန်ရာတွင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့သူ မြဝတီ ဦးရဲခေါင် (ယခု သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ဆစ်ဒနီမြို့တွင် အခြေချ နေထိုင်နေသူ) ကို မေးမြန်းရာတွင်လည်း အောက်ပါအတိုင်း သူသိသမျှ စုံလင်စွာ ပြန်လည် ပြောပြခဲ့ပါသည်။
ဗိုလ်နေဝင်းသည် သူ့ဘဝ ရှေ့ရေးအတွက် ပြဿနာ တရပ်ကို စဉ်းစားရာ၌ ကစားသမားပီပီ အမှား အမှန်ကို အဓိက မထားဘဲ အနိုင် အရှုံးကိုသာ အမြဲတမ်း အဓိက ထားတတ်သူဖြစ်၍ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တပ်မှ ထွက်ကာ နိုင်ငံရေး နယ်ထဲသို့ ဝင်ရောက်သွားချိန်တွင် သူ၏ စဉ်းစားခန်း ဝင်ခဲ့သည်မှာ ဂဠုန်ဦးစောသည် တချိန်က နန်းရင်းဝန်ဟောင်း တဦးဖြစ်လျက်၊ သူ့ကို အထင်သေး၍ မရ၊ အကယ်၍ သူသည် မတော်တဆ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် နိုင်ငံရေးအရ ဈေးကစားချက်အား ပြိုင်ရာ၌ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကဲ့သို့ 'တနှစ်အတွင်း လုံးဝ လွတ်လပ်ရေး' ဟု ကေ့းကြော်သံ မပေးဘဲ ဗြိတိသျှ အစိုးရအား 'ဒိုမီနီယန်' လျှော့ဈေးပေးကာ ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်သွားခဲ့သော် ဦးတင်ထွဋ်သည် သူ့လူရင်း ဖြစ်ရုံသာမက ပညာ အရည်အချင်း အားဖြင့်လည်း ဗြိတိသျှ ပဋိညာဉ်ခံဝန်ထမ်း (ICS) ဖြစ်သောကြောင့် မျိုးချစ်ပါတီ အစိုးရတွင် ဧကန်မုချ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ဗိုလ်နေဝင်းသည် ရှေ့ဆက် မတွေးတော့ဘဲ ရန်ကုန်ဘဆွေနှင့် လွန်စွာ ရင်းနှီးသော မြင်းခြံသား ဗိုလ်ကြီး (ယပက်လက်) လှယွှေအား သွားခေါ်ခိုင်းလိုက်သည်။ ထို့နောက် (မြဝတီ ရဲခေါင် ပြန်ပြောင်းပြောပြသည့် ရန်ကုန်ဘဆွေ၏ ပြောဆိုချက်မှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ကြံမှုနေ့ ညနေပိုင်းမှ စတင်၍ ဖြစ်သည်။)
ဂဠုန်ဦးစောအား ရှေးဦးစွာ သုတ်သင် ရှင်းလင်းရန် အတွက် သူနှင့် ကိုမြလှိုင်တို့ သည် စပတ်လမ်း တနေရာမှ ဂဠုန်စောအား သူ၏ 'သူရိယ' သတင်းစာတိုက် ရုံးပေါ်မှ ဆင်းလာပြီး ကားပေါ် တက်ချိန်အထိ စောင့်၍ သူ့ကားနှင့် မလှမ်းမကမ်းမှ ကပ်လိုက် သွားကြသည်။ ဂဠုန်ဦးစော အမြဲသွားလေ့ ရှိသော အိမ်ပြန်လမ်းများ အတိုင်း လိုက်သွားရာမှ အခါအခွင့် ကောင်းမည့် ရန်ကုန်ထောင်ကြီးနှင့် ပြည်လမ်းထိပ် တနေရာတွင် ရန်ကုန်ဘဆွေသည် ထိုအခွင့်ကောင်းကို လက်မလွှတ်ဘဲ သူက ကိုမြလှိုင်၏ ကားကို အရှိန်လျှော့စေ၍ သူ၏ လက်တွင်းမှ သေနတ်ဖြင့် ကားဒရိုင်ဘာနှင့် ယှဉ်ထိုင်ပြီး လိုက်ပါလာသော ဂဠုန်စော၏ နောက်စေ့တည့်တည့်ကို ချိန်ကာ ပထမအချက် ပစ်ထည့်လိုက်သည်။ သို့သော် လွန်စွာ အကင်းပါး၍ အမြဲမပြတ် သတိကပ်နေသော ဂဠုန်စောသည် သူ့ရှေ့ ကားမှန်ထဲမှ 'ပြည်သူ့ရဲဘော်' စစ်ဝတ်စုံ ဝတ်ထားသည့် လူနှစ်ယောက် အနက် ခေါင်းတုံးဆံတောက်နှင့် သူက သူ့အား သေနတ်ဖြင့် ချိန်လိုက်သည်ကို လှမ်းမြင်ရသော အချိန်၌ပင် သေနတ်သံ တချက်နှင့် အတူ သူ့နဖူး ပူခနဲ ဖြစ်သွားသည်။ ထိုအချိန်၌ပင် သူသည် ကားဖင်ထိုင်ခုံဘေး ဒရိုင်ဘာ ရှိရာဘက်သို့ သူ့ကိုယ်ကို လှဲအချ နောက်ထပ် သေနတ်သံ ၂ ချက် ထပ်ထွက်လာသည်။ ဒရိုင်ဘာကလည်း ကားကို ဘရိတ်အုပ်၍ ကားထဲ ငုံ့နေလိုက်သည်။ ကားမှန်ကွဲစများမှာ သူတို့ နှစ်ဦးလုံးကို လွင့်စင် ထိမှန်ကြသည်။
"ကိုရဲခေါင်ရယ်၊ လူတွေရဲ့ ကံဆိုတာ မှန်ပဲ မှန်သလားတော့ မပြောတတ်ပါဘူး။ ခင်ဗျားလဲ ကျနော့်လက်ကို အသိသားပဲ၊ ကျနော် ပစ်လိုက်တာကတော့ သူ့နောက်စေ့တည့်တည့်ကို ပစ်ထည့် လိုက်တာပါပဲဗျာ။ ဒါပေမဲ့ သူက ကားမှန်ထဲမှာ ကျနော်ကို မြင်လို့ လှည့်အကြည့်လိုက်မှာ ကျနော် ပစ်လိုက်တဲ့ ကျည်ဟာ သူ့နောက်စေ့ကို မမှန်ဘဲ သူ့နဖူးကို ရှပ်မှန်သွားတာပဲ" ဟု ကြိတ်မနိုင် ခဲမရ ပြောပြပါသည်။
ဤကား လွန်ခဲ့သော ၁၉၇၂ ခုနှစ်ခန့်က ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်မှူးအောင်၊ စာရေးဆရာ ရန်ကုန်ဘဆွေနှင့် မြောင်းမြဘဆွေတို့သည် ယိုးဒယားနိုင်ငံ ကလန်ဒန်မြို့ သြဇာခြံကြီး အတွင်း လျှို့ဝှက် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် အသံလွှင့်ဌာနသို့ ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဦးနုနှင့် တွေ့ဆုံရန်အလာ၊ အသံလွှင့်ဌာန၌ ၃ ရက်မျှ နေထိုင် သွားကြစဉ် အတွင်း၊ ကျနော့်အား ရန်ကုန်ဘဆွေက စကားစပ်မိ၍ ပြောပြခဲ့ဖူးသော ဖြစ်ကြောင်းကုန်စဉ်၊ ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ၊ အတွင်းရေး သတင်းကလေးတကွက် ဖြစ်သတည်း။
အခြား စွပ်စွဲချက် တခုမှာ၊ ဝါရှင်တန်ဒီစီမှ ထုတ်လွှင့်သော 'လွတ်လပ်သော အာရှအသံ'၊ မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်၊ ၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလနှင့် စက်တင်ဘာလ ထုတ်လွှင့်ချက် (အမှတ် ၁၁၂ နှင့် ၁၁၃) တို့၌ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဖလော်ရီဒါနယ်တွင် အခြေချ နေထိုင်နေသော သတင်းစာ ဆရာကြီး ကြေးမုံဦးသောင်း (ခေါ်) စာရေးဆရာ အောင်ဗလ၏ ပြောကြားချက်များတွင် နေဝင်း ပါဝင် ပတ်သက်မှု ရှိသည့် အချို့ အစိတ်အပိုင်းများကို ထုတ်ဖော်သွားခဲ့သည်။ ယင်းတို့မှ သက်ဆိုင်သည်များကို အောက်တွင် ကောက်နုတ် ဖော်ပြပါမည်။
ဦးအောင်ဆန်း၏ လုံခြုံရေးကို ကာကွယ်ရန် တာဝန် ပေးထားသော အထူးအစောင့် နှစ်ဦးသည် အမြဲတစေ ဦးအောင်ဆန်း၏ လက်တကမ်းတွင် ရှိပါလျက် အခင်းဖြစ်ပွားသော ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့ နံနက်က မရှိကြဘဲ ပျောက်ကွယ် နေကြသည်မှာ ဗိုလ်မှူးနေဝင်း၏ အစီအစဉ်ဟု မုချ ယုံကြည်ရလေသည်။
ထိုအစောင့်တို့မှာ ဗိုလ်နေဝင်း၏ လူများ ဖြစ်ကြသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို လျှို့ဝှက် သက်တော်စောင့်များ အဖြစ် တာဝန် ပေးလိုပါသည်၊ စိတ်ချရသော ရဲဘော်များ ပေးပါဟု ဦးကျော်ငြိမ်းက ဗိုလ်နေဝင်းထံ တောင်းရာမှ ရရှိခဲ့သည်။
ဗိုလ်မှူး နေဝင်း ပေးသော သက်တော်စောင့် ၂ ဦးဖြစ်သူ ရဲဘော် ဘတုပ်နှင့် ရဲဘော် ရဲမြင့်တို့သည် သေနတ်ပစ် လက်ဖြောင့်ကြသည်။ ခြောက်လုံးပြူးနှင့် ပစ္စတို(လ်) ၁၀ ချက် ပစ်လျှင် ၈ ချက်တို့သည် ပစ်မှတ်တို့၏ ဗဟိုသို့ ထိမှန်အောင် ပစ်နိုင်သူများ ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်နေဝင်း၏ ရာသက်ပန် လူယုံတော်၏ ဖျာပုံပြောက်ကျားတပ်မှ ပြောက်ကျားဗိုလ်၏ လက်စွဲများ ဖြစ်ကြသည်။
ထိုနေ့က ရှောင်နေကြသော သက်တော်စောင့် ၂ ဦးသည်လည်း ပျောက်သွားသည်။ ရက်အနည်းငယ်ကြာမှ အလောင်း တွေ့ကြရသည်။ အလံနီ သူပုန်တို့က သတ်သည်ဟု အမှု ပိတ်လိုက်သည်။
သခင်ရှုမောင်၊ (ခ) ဗိုလ်နေဝင်း၊ ပြည်မြို့ အနီးရှိ ပေါင်းတလည်မြို့၌ ၁၉၁၀ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားသည်။ ရန်ကုန်မြို့၊ ကိုရှုမောင်သည် ဂျပ်ဆင် ကောလိပ်တွင် တက်ရောက် ပညာသင်ကြားခွင့် ရခဲ့သော်လည်း ၁၉၃၁ ခုနှစ်တွင် ဘွဲ့မရဘဲ ကျောင်းထွက်ခဲ့ရပြီး၊ ယခင်ချာချီလမ်း (ယခု ကိုယ့်မင်းကိုယ်ချင်းလမ်း) ရှိ ရန်ကုန်မြို့၊ ဆင်ခြေဖုံး ရပ်ကွက် စာတိုက်ခွဲတခုတွင် အငယ်တန်းစာရေးလေး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ စာတိုက်စာရေး၊ ထို့နောက် သခင်ဗစိန်၊ သခင်ထွန်းအုပ်တို့၏ နောက်လိုက် ဘဝမှ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဖြစ်လာပြီးနောက် ၁၉၄၃ ခုနှစ်မှ ၁၉၄၅ ခုနှစ် အထိ မြန်မာ့ အမျိုးသား တပ်မတော်၏ စစ်ဦးစီးမှူး ဖြစ်သည်။
၁၉၁၁ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည့် တရုတ်-မြန်မာ ကပြားဖြစ်သူ ငယ်နာမည် ရှုမောင် (ခေါ်) ဦးနေဝင်းသည် ဦးနုထက် ၄ နှစ်ငယ်ပြီး ဦးအောင်ဆန်းထက် ၅ နှစ်ကြီးသူ ဖြစ်သည်။ ရဲဘော်သုံးကျိပ် အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ပင် ဖြစ်သော်ငြားလည်း ဦးနေဝင်းသည် ၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ နောက်ပိုင်းကျမှသာ ယှဉ်ပြိင်သူများကို ရက်ရက်စက်စက် ဖယ်ရှားပြီး ထိပ်ပိုင်းနေရာသို့ မရမနေ စတင် တက်လှမ်းလာနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက် ကွန်မြူနစ်များ၊ ပြည်သူ့ ရဲဘော်များ တောခိုသွားပြီး အမှတ် (၁) နှင့် အမှတ် (၃) ဗမာ့ လက်နက်ကိုင်တပ်များ ပုန်ကန်ထ့ကသည့် အချိန်တွင် ဗိုလ်နေဝင်း၏ အမှတ် (၄) ဗမာ့ လက်နက်ကိုင်တပ်သည် အစိုးရ အတွက် တခုတည်းသော မှီခိုအားထားရာ အဓိကမဏ္ဍိုင် ကြီးဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးကို တပြည်လုံး ဖြန့်ကျက်ထားနိုင်ရန် အတွက် ဦးတင်ထွဋ်၏ ပြည်ထောင်စု အရန် တပ်ဖွဲ့များ ကဲ့သို့သော တပ်ဖွဲ့ အသစ်များကိုထူထောင်ခဲ့ရသည်။
ထို့နောက် ၁၉၄၉ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၂ ခုနှစ် အထိ တပ်မတော်၏ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် အဖြစ် ဆောင်ရွက်ကာ၊ ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် စစ်တပ်ဖြင့် နိုင်ငံတော် အာဏာကို သိမ်းယူခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၄ ခုနှစ် အထိ တော်လှန်ရေး ကောင်စီ၏ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၁၉၇၄ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၁ ခုနှစ် အထိ ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံ သမ္မတ အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၈ ခုနှစ် အထိ မြန်မာ့ ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ပြိုင်ဝံ့သူ မရှိ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ရှုမောင်သည် အငယ်တန်း စာရေးလေး အဖြစ် အလုပ်လုပ်ဖက် ဒေါ်တင်တင်ကို ၁၉၃၀ ခုနှစ်လည်တွင် လက်ထပ်ခဲ့ပြီး သား ၂ ဦး ထွန်းကားခဲ့သည်။ သူတို့ ကွဲပြီးနောက် မနာလို ဝန်တိုပြီး ဒေါသနှင့် အာဃာတတရား ကြီးမားလှသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်း အဖြစ် မစ္စစ် ကေတီတောင်ကြီး (ခ) ကေတီဘသန်း (ခ) ခင်မေသန်းကို ၁၉၅၀ ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် လက်ထပ်ခဲ့သည်။ သူ့တွင် သမီး သုံးဦး ပါရှိလာခဲ့ပြီး နေဝင်းနှင့် သမီး ၂ ယောက်၊ သား ၁ ယောက် ရရှိခဲ့သည်။ သူသည် ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၀ ခုနှစ်လည်တွင် ဒေါ်ကြာဆန်ဟု ခေါ်သော ရခိုင် အမျိုးသမီး တဦးကို ဇနီးမယား ပြုခဲ့သည်ဟု ကောလာဟလ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကုန်းဘောင်မင်းဆက်မှ ဘုရင် မင်းတုန်းမင်း၏ မြစ်တော်သူ ဂျွန်ရို့စ် ဘယ်လာမီ (June Rose Bellamy) (ခ) ရတနာနတ်မယ်ကို ၁၉၇၅/၇၆ ခုနှစ်တွင် တရားဝင် လက်ထပ်ခဲ့ပြန်သည်။ ယင်းအိမ်ထောင်မှာလည်း ခေတ္တမျှသာ ခံပြီး အိမ်တွင်း ရန်ဖြစ်မှု အတွင်း ဆေးလိပ်ပြာ ဖန်ခွက်ဖြင့် ပစ်ပေါက်မှုဖြင့် အဆုံးသတ် သွားခဲ့သည်။ မည်သူက စပစ်ပေါက်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းပြန့်ပွားမှု အတွင်း ဝိဝါဒ ကွဲလွဲမှုများ ရှိခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး သိရှိရသည့် လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုမှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် သမိုင်းဌာနမှ သုတေသန ကထိက ဒေါ်နီနီမြင့်နှင့် ဖြစ်သည်။ သူ့နှင့် ကွဲပြီး ပြန်လည် လက်ထပ်ပြန်သည့် အတွက် ယင်းကို နှစ်ကြိမ်ဟု တွက်လျှင် စုစုပေါင်း (၆) ကြိမ် ရှိသည်။
၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် သမက်နှင့် မြေး ၃ ယောက် ဖြစ်သော အေးဇော်ဝင်းနှင့် သားသုံးဦး ဖြစ်သူ အေးနေဝင်း၊ ကျော်နေဝင်း၊ ဇွဲနေဝင်းတို့မှာ မအောင်မြင်သော အာဏာသိမ်းရန် ကြံစည်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီး ခံခဲ့ကြရသည်။ ထိုသို့ နိုင်ငံတော် သစ္စာဖောက်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခြင်း ခံကြရပြီးနောက် ဦးနေဝင်းနှင့် သမီးဖြစ်သူ ခင်စန္ဒာဝင်းတို့ ကိုယ်တိုင်သည်ပင် အကျယ်ချုပ် ကျခံခဲ့ရသည်။ နိုင်ငံတော် အာဏာကိုသိမ်းရန် ပူးပေါင်း ကြံစည်မှုဖြင့် တရားစွဲခံရသူ ၄ ဦးကို ၉ လကြာ နိုင်ငံတော် ပုန်ကန်မှုဖြင့် စစ်ဆေး တရားစီရင်ကာ သေဒဏ် အပြစ်ပေးခဲ့သည်။ သူတို့အား စီရင်မည့်ရက်ကို မသတ်မှတ်သေးသော်လည်း သူတို့မှာ သေဒဏ်ကျခံရန် ထောင်တွင်း တနေရာတွင် ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် အာဏာရှင်အိုကြီးမှာ အကျယ်ချုပ် ကျနေစဉ် ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ နေအိမ်၌ပင် သေဆုံးသွားသည်။
ဗိုလ်အောင်ကြီး၊ အငြိမ်းစား ဗိုလ်မှူးချုပ်၊ ၁၉၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ခရိုင် ပေါင်းတည်မြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ တရုတ်-မြန်မာ မိသားစုမှ ဆင်းသက်ခဲ့သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် မတိုင်မီ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင် ဂျပန် ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှု၌ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်နှင့် ဖျာပုံခရိုင် အတွင်း ဗိုလ်နေဝင်း၏ လက်ရုံး အရာရှိ တဦး အဖြစ် ပါဝင် လုပ်ကိုင်လာခဲ့သည်။ ထို့နောက် လွတ်လပ်ရေး ရအံ့ဆဲဆဲ တပ်မတော်ကို ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းလိုက်သော အခါ အမှတ် (၄) ဗမာ့ သေနတ်ကိုင် တပ်ရင်းတွင် ဗိုလ်နေဝင်း၏ လက်အောက် အရာရှိအဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် ဆိုရှယ်လစ် ပါတီ၏ စည်းရုံးရေးမှူး ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၅၈-၆၀ ခုနှစ်၊ အိမ်စောင့် အစိုးရ အဖွဲ့တွင် အဓိက နေရာများကို ရခဲ့သည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် တော်လှန်ရေး ကောင်စီဝင် ဖြစ်လာပြီး၊ ဒုကာကွယ်ရေး စစ်ဦးစီးချုပ်၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် သူ၏ လက်တွေ့ကိုသာ အရေးထားသော ပေါ်လစီများကြောင့် အစိုးရ အဖွဲ့မှ ထုတ်ပယ်ခြင်း ခံရပြီး၊ ၁၉၆၅ မှ ၁၉၆၈ ခုနှစ်၊ ၁၉၇၃ ခုနှစ်များတွင် ထောင်ကျခဲ့သည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် စီးပွားရေးပေါ်လစီ၊ လူ့အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် ပတ်သက်သော အိတ်ဖွင့် ဝေဖန်စာများကို နေဝင်းထံသို့ ရေးသားပေးပို့ခြင်း၊ ထိုစာများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြန့်ဝေခဲ့ခြင်း အားဖြင့် လူထု အုံ့ကမှုတွင် သြဇာ လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ ထိုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ထိန်းသိမ်းခံရပြီး သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် လွတ်မြောက်ခဲ့ကာ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြန်သည်။ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် မှတ်ပုံတင်ခဲ့သော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုပါတီမှ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် နှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ပါတီစုံး အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရှုံးနိမ့်သွားပြီး နောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံရေး၌ ပါဝင် လှုပ်ရှားနိုင်ခြင်း မရှိတော့ပေ။
စိန်လွင် (အငြိမ်းစား ဗိုလ်မှူးချုပ်)၊ "သားသတ်သမား" ဟု အမုန်းခံရသူ။ သူ၏ သခင် အာဏာရှင် နေဝင်းနှင့် နီးစပ်သူဖြစ်ပြီး ဘဝတလျှောက်လုံး ယုံကြည် စိတ်ချရသူ တဦးအနေဖြင့် ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်ခံရသော စွယ်စုံရ ပုဂ္ဂိုလ်တဦး အဖြစ် သစ္စာရှိစွာ အမှုတော် ထမ်းခဲ့သည်။ ၁၉၄၃ ခုနှစ်မှ စ၍ တော်လှန်ရေးတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး မျိုးချစ် ဗမာ့ တပ်မတော်မှ ဗမာ့ တပ်မတော် အသစ်တွင် အရာရှိဖြစ်ရန် လျှောက်ထားခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း အရာရှိ ရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့က သူ့ကို မရွေးချယ်ခဲ့ချေ။ သို့သော်လည်း စိန်လွင်က ရဲဘော် အဖြစ် စာရင်းသွင်းခဲ့ပြီး အမှတ် (၄) ဗျူးရစ်ဖ် (4th Bur:f) တပ်ရင်းမှူး ဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူး နေဝင်း၏ ကိုယ်ပိုင် အမှုထမ်း အဖြစ် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။ ထို့နောက် အရာရှိ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် ပထမဆုံး နာမည်ကြီးဖို့ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး အေးမောင်၏ ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့ အနီး ကေအဲန်ဒီအို စခန်းကို ဝိုင်းရာတွင် သူပါဝင်ခဲ့ပြီး တိုက်ပွဲအတွင်း ကရင်ခေါင်းဆောင် စောဘဦးကြီးကို အသေရမိသည်။ ထို့နောက် အဖေကြီး၏ သစ္စာတော်ခံ နောက်လိုက်နှင့် လူသတ်သမား အဖြစ် ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ရာပေါင်းများစွာကို အသေပစ်ချခဲ့သော တပ်စုများကို သူ ကွပ်ကဲခဲ့သည်။ သမိုင်းဝင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက်အအုံကိုလည်း ဖောက်ခွဲ ဖြိုချခဲ့သည်။ သူ့အနေဖြင့် သွေးလွှမ်းမှု အမျိုးမျိုး အတွက် တာဝန်ရှိခဲ့ပြီး ဦးသန့် ဈာပန ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ဖြစ်ရမှုနှင့် ရှစ်လေးလုံး ရက်စက်မှုများက သူ့အတွက် နာမည် အပျက်ရဆုံးများ ဖြစ်ခဲ့သည်။
နေဝင်းက သူ့ကို သူ၏ ယုတ်မာရက်စက်သော လုပ်ဆောင်မှုများ အတွက် ကောင်းစွာ ချီးမြှင့်သည့် အနေဖြင့် ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော် သမ္မတနှင့် မဆလ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန်ပေးခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် တတိုင်းတပြည်လုံး အနှံ့ ပြည်သူ သန်းပေါင်းများစွာသည် လမ်းမများပေါ်သို့ ထွက်၍ စစ်အုပ်စိုးမှု ရပ်စဲရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ ပြည်သူလူထု အတွက် ၂၆ နှစ်ကြာ ဖိနှိပ်ခံခဲ့ရမှုသည် လုံလောက်ခဲ့ပြီ။ စထွက်သည်နှင့် စိန်လွင်က ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း တုံ့ပြန်သည့် အနေဖြင့် ဆန္ဒပြမှုများအား သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ် လူစုခွဲရန် ခြေမြန်တပ်မ (၂၂) မှ စစ်သားများကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဆန္ဒပြနေသူ လူအုပ်ကြီးများထဲသို့ စစ်တပ်က လက်လွတ်စပယ် ပစ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့် လူသုံးထောင် (၃,၀၀၀) ထက်မနည်း သေကြေခဲ့ရသည်။ ထိုသို့ ရှစ်လေးလုံး ပြည်သူ့ အရေးတော်ပုံ အတွင်း သူ၏ ပြည်သူလူထု အပေါ် လူမဆန်စွာ ရမ်းကား သတ်ဖြတ်မှုများကြောင့် "ရန်ကုန်မှ သားသတ်သမား" အမည်ဖြင့် ကမ္ဘာကျော်ခဲ့ရသည်။ ပြည်သူလူထု၏ ဒီရေအလား ဆန့်ကျင့် အုံ့ကမှုများကြောင့် စိန်လွင်၏ သမ္မတ သက်တမ်းသည် ၁၈ ရက်သာ သက်တမ်း တည်မြဲခဲ့ပြီး၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် တာဝန် အားလုံးမှ နှုတ်ထွက် ပေးခဲ့ရသည်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် သူ့ဆရာသခင် အိမ်အကျယ်ချုပ်သဖွယ် ခံရပြီးနောက် မကြာမီပင် သူလည်း တရားမဝင် ရရှိနေသော ခံစားခွင့်များ၊ သြဇာ အာဏာများ ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး မဖြစ်စလောက်သော စစ်တပ် ပင်စင် လစာလေးဖြင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးစွာ ရှင်သန် နေခဲ့ရသည်။ သူ၏ အစာအိမ်ရောဂါ အတွက် စင်ကာပူတွင် ကုသမှု ခံယူပြီး အပြန် ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့ အသက် ၈၁ နှစ် အရွယ်တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ သေဆုံးသည်
၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံရေးသမား တဦး တယောက်တည်း၏ အာဏာလောဘရမက်ကို ကျေနပ်မှု ပေးစေနိုင်ရန် အတွက် ရဲဘော်သုံးကျိပ် စစ်ခေါင်းဆောင်နှင့် ပြည်သူများ အပေါ် ဆွဲဆောင်မှု ထက်မြက်လှသည့် နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်ကြီး တဦးနှင့် အတူ ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီ ကျွန်သပေါက် လက်အောက်ခံ ဘဝမှ လွတ်လပ်သော နိုင်ငံတော် ဘဝသို့ ကူးပြောင်းနေသည့် စပ်ကူးမတ်ကူး ကာလ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှေ့တန်း အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင် ခေါင်းဆောင်မှု ပေးနိုင်သည့် အခြားဉာဏ်ပညာ အရှိန်အဝါ ထက်မြက်လှသည့် ခေါင်းဆောင် ခြောက်ဦးနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း သားကောင်း ရတနာ ၂ ဦးတို့ အသက် ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ဤသည်ကား "အတော်ဆုံးသူများမှာ သူတို့ ကံကြမ္မာကို မြဲအောင် မတတ်နိုင်ကြ။ သူတော်ပေါင်း၊ နုကေ့ကောင်း၍ သူယုတ်မာ သက်ဆိုးရှည်သည်" ဖြစ်ပါလေသတည်း။
ထိုလုပ်ကြံမှုကြီးနှင့် ပတ်သက်၍ အဖြေ တစုံတရာ ပေးရန်ထက် 'ဂဠုန် ဦးစောနောက်မှာ ဘယ်သူတွေ ရှိပါလိမ့်' ဟူသော အတွေးနှင့် သို့လော သို့လော မေးခွန်းများ ထပ်မံ ပေါ်ပေါက်ကောင်း ပေါ်ပေါက်လာစေနိုင်သည့် ဦးအောင်ခင် သုတေသနပြု ထုတ်ဖော် ရေးသားထားသည့် (တတိယအကြိမ် တည်းဖြတ် ထုတ်ဝေသည့်) "ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဘယ်သူသတ်သလဲ" စာအုပ်မှနေ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အချက်အလက်များကို ကောက်နှုတ် ဖော်ပြ လိုက်ပါသည်။ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ လေ့လာ ဖတ်ရှုလိုသူများ အနေဖြင့် ဒီကွန်ရက် စာမျက်နှာပေါ်မှာ လွှင့်တင်ထားပြီး ဖြစ်သည့် 'မြန်မာ eBook များ' (ဝါ) 'အတ္ထုပ္ပတ္တိများ' ၏ ကဏ္ဍခွဲ တခုဖြစ်သည့် 'အတ္ထုပ္ပတ္တိ စာပေများ' ထဲရှိ "ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဘယ်သူသတ်သလဲ" စာအုပ်ကို ဆွဲယူ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ရင်းမြစ်..ူမန်မာ့ သတင်းဆက်သယ်ြရေး နည်းပညာအဖြဲႚ
ထုတ်နှုတ် ကူးယူဖော်ပြခဲ့သည့် စာအုပ်။
'ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဘယ်သူသတ်သလဲ'၊ ဦးခင်အောင်၊
အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုသူ၊ ဒေါက်တာတင့်ဝေနှင့် ဒေါက်တာအေးကျော်၊
၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ၊ တတိယအကြိမ် ပြုပြင်တည်းဖြတ် ထုတ်ဝေခြင်း၊
ထုတ်ဝေသူ၊ ဒေါ်ခင်မျိုးအေး၊ ခေတ်ပြိုင် ဂျာနယ်တိုက်။